Privacy & Transparency | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Privacy & Transparency
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Nov 20, 2012 in Arts & Humanities, Business & Economics, Complaint / Claim, Creative Writing, Myanmar Gazette, Think Different | 57 comments
Professional & Personal ဆိုတဲ့ပိုစ့်က ကျွန်တော်ကြောင်ဝတုတ်ကို အတော်လေးလူသိများလာစေတဲ့ ပိုစ့်လို့ ပြောရရင်မမှားဘူးလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်…
အခုရက်ပိုင်း ဒီ Professional နဲ့ Personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတာ… ဆွေးနွေးနေကြတာတွေ့တော့… ကျွန်တော်ထပ်ပြီးခံစားရတာလေးတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောချင်ပါသေးတယ်…
အဲဒီအကြောင်းကတော့ Privacy & Transparency ဆိုတာပါပဲ…
Privacy ဆိုတာ မိသားစုထဲမှာရော၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာရောရှိနေတဲ့အရာပါ…
ရွာထဲမှာစာတွေရေးကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ဘယ်သူကတော့ဖြင့် ဘာအလုပ်လုပ်ပါတယ်… ဘယ်မှာနေပါတယ်… ဘယ်လိုပုံစံပါဆိုပြီး ရွာထဲမှအတိအလင်းနေကြတဲ့မန်ဘာ တွေရှိသလို… ရွာသူားတွေနဲ့ မတွေ့ဆုံကြဘဲ၊ မျက်နှာမပြဘဲ စာရေးတယ်… စာဖတ်တယ်… ကော်မန့်လေးတွေပေးတယ်… အဲဒီလိုမန်ဘာတွေလဲရှိပါတယ်…
ကောင်းပြီး… သူတို့ဘာလို့မျက်နှာမပြတာလဲ… အင်တာနက်ပေါ်မှာရေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ဘ၀မှန်ကို ဖုန်းကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်… ပြောရမယ်ဆိုရင် Privacy ပေါ့… မိမိလျှို့ဝှက်ချက်ကို လူတိုင်းထိန်ချန်ပိုင်ခွင့်ရှိတာ သည်လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ အခွင့်အရေး… တနည်းအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးပါ…
Privacy ဆိုတာ ရာဇ၀တ်မှုမဟုတ်ပါဘူး…
အဲဒီလိုပဲအဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ အသင်းအဖွဲ့တိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာဆိုင်ရာ ဥပဒေကြောင်းအရ… ထိန်ချန်ထားရတဲ့လျို့ဝှက်ချက် (Secret) ဆိုတာ ရှိရပါမယ်… အဲဒါက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (သို့) အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက် (Top Secret) လို့ဆိုရမှာပါ…
ဂဇက်မှာစာရေးနေသူအများစုမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိကြပါတယ်… အဲဒီလိုပဲ လူတော်တော်များများရေးတဲ့စာတွေရဲ့မြစ်ဖျားခံရာကို ပြန်ကြည့်ရင် လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဘ၀ရဲ့ဟာသတွေ၊ စိတ်အချဉ်ပေါက်မှုတွေပေါ်မူတည်နေပါတယ်… အဲဒီတော့ အပေါ်ယံပိုင်းအရကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့တတွေရေးတဲ့စာတွေက Professional Life ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေရောယှက်နေတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်… ဒါပေမယ့် စာရေးသူတွေအားလုံးက လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ဂဇက်မှာ အတိအကျချရေးပြတာမျိုးကိုတော့ အခုအချိန်အထိမတွေ့ရပါဘူး… အဲဒီအတွက် သူ့ Professional ရဲ့ Secret သို့တည်းမဟုတ် Organization တစ်ခုရဲ့ Secret ကိုချရေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ Personal ၀ါသနာအရ စာရေးတာကို Professional အလုပ်နဲ့ရောထွေးတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး…
ကျွန်တော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်သော ခရီးစဉ်များအကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံများပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ကျွန်တော်ပိုစ့်တွေရေးပါသည်… ကျွန်တော့ကဲ့သို့ မန္တလေးမှ လေးပေါက်ဆိုလျှင် သူအလုပ်ဖြင့်သွားရာနေရာ တိုင်း ဓာတ်ပုံလေးများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ပါသည်… ထိုသို့မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အမှတ်တရလေးများကို ရေးခြင်း အား Professional နှင့် Personal ရောထွေးခြင်းဟု မမြင်ပါ… မြင်လို့လဲမရပါ…
Professional နဲ့ပတ်သက်ပြီး Transparency အကြောင်းကိုဆက်ပြောချင်ပါတယ်…
လူတွေက Transparency ရှိသင့်တဲ့အချိန်မှာ Transparency ရှိရပါလိမ့်မယ်… အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် သိပ်ပြီးတော့ လျို့ဝှက်လွန်းရင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ပြသနာရှိပါတယ်… အဲဒီတော့ Professional မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Personal Social မှာပဲဖြစ်ဖြစ်… Transparency ရှိရပါလိမ့်မယ်… ဒါမှလဲအလုပ်ဖြစ်မှာမို့လို့ပါ…
Transparency မရှိဘဲနဲ့တော့ ယုံကြည်မှုကိုမရနိုင်ပါဘူး…
အခု ကျွန်တော်တို့ ဒါဇင်ပလပ်ဆိုပြီးတော့ ပညာရေးဦးတည်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို လုပ်ဖြစ်တယ်… ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Personal Life ၅၀% လောက်တော့အကုန်လုံးကို အသိပေးရပါတယ်… အသိမပေးဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ လှူချင်တဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို ကျွန်တော်တို့မရနိုင်ပါဘူး… အဲဒီတော့ Professional အရအလုပ်မှာ Transparency ရှိရခြင်းကို Professional တွင် Personal ရောနှောခြင်းလို့ စွတ်စွဲမရပေ… ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကို Transparency ရှိခြင်းဟုသာဆိုရပေလိမ့်မယ်…
ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်… ဂဇက်တွင်လူအများ မိမိသန်ရာသန်ရာစာလေးများရေးကြသည်… ထိုသို့စာရေးခြင်းကို ဂဇက်တွင် Professional ဆန်ဆန်စာရေးသည်ဟုဆိုကြပါစို့… ဂဇက်ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာသင့်သည်… ထပ်ပြောရလျှင် ဂဇက်မှကော်မန့်တစ်ခုအတွက်၊ ပိုစ့်တစ်ခုအတွက် အခကြေးငွေပေးထားသည်… ဥာဏ်ပူဇော်ခဟုဆိုနိုင်ပါသည်… ဂဇက်ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများတွင် မညီမျှမှုရှိသည်များ၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများရှိနေလျှင် ဂဇက်အယ်ဒီတာဦးခိုင်ထံသို့ အီးမေလ်းပို့တိုက်ရိုက်ပြော ကြားခွင့်ရှိသည်… သို့တည်းမဟုတ် ပိုစ့်ထဲတွင်လူကြီးလူကောင်းပီသစွာ ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်… ဒါကို Professional ဆန်သည်ဟုဆိုရမည်မဟုတ်ပါလော…
ဂဇက်ပေါ်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်တွေ့ဆုံခြင်း… မိမိ၏မိသားစုအကြောင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းများအားပြောဆိုခြင်း၊ အတွေ့အကြုံများအားမျှဝေခြင်းတို့အား ဂဇက် Professional ထဲကို Personal များရောထွေးလာခြင်းဟုအမည်တပ်ခြင်းကိုကား လက်ခံမရနိုင်ကြောင်းပါ… ထိုသို့ပြောဆိုရေးသားခြင်းကိုကား Privacy ထားသော Personal Life မှတချို့သောအကြောင်းအရာများကို Transparency ရှိရှိချပြခြင်းဟုသာ လက်ခံရမည်ဖြစ်ပေတော့သည်…
ကျွန်ုပ်၏ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် Professional နှင့် Personal ကို လုံးလုံးလျားလျား၊ လုံးလည်ချာလည်လိုက်ပြီး နားရှုပ်မျက်စိရှုပ်ဖြစ်သွားစေမှုများအပြင်… Professional နှင့် Personal နောက်ကွယ်တွင် မျဉ်းပါးပါးလေးဖြင့် ခြားထားသော Privacy & Transparency အကြောင်းကို ထည့်မပြောမိသော ကျွန်ုပ်၏ပေါ့လျော့မှုသာဖြစ်ကြောင်းတောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျား…
ဦးကြောင်ဝတုတ် ဆိုတာ ..
အောက်က ဖုန်းကြီး ကစားနေတဲ့ သူဆိုတာကို
ပြီးမှ အေးအေး ဆေးဆေး ပြန်ဖတ်ပြီး တွေးကြည့်ရမယ် …
ခု လောလောဆယ်တော့ ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်သွားတယ် …
ဘာမှ မသိသေးဘူး …
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကိုကြီးဝတုတ် ကျမလည်း သေသေချာချာ လေ့လာပြီး နားလည်သဘောပေါက်ရုံသာမက Professional နှင့် Personal ကိုသာ မက Privacy & Transparency ကိုပါ ကိုယ်တိုင်လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
နေ့စေ့လစေ့ မပေါ့မပါးကြားက ဒီလို စေတနာ ထားပြီး ရှင်းလင်းပြောဆိုပြတဲ့ အတွက်လည်း အကိုကြီးဝတုတ် စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ချောချောမောမော မီးဖွားနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
ပြောမိပြန်ပြီ ဒီဆုတောင်း ( ဒီစာ သူကြီး ဦးမိုးခိုင် မမြင်စေရ )
ညီပြောတဲ့ ပါစင်နယ်နဲ့ ထရန်ပါရဲန်းစီကို သဘောတူပါတယ်။
ကို က တော့ ဒီလိုနားလည်တယ်ညီရေ့။
ပါစင်နယ်တွေ ထည့်ရေးတယ်ဆိုလဲ ဖတ်တဲ့သူက ထိန်းသိမ်းရမဲ့လူမှုစည်းကမ်းဆိုတာလေးရှိပါတယ်။
ပြောရရင် အိမ်နီးနားချင်း တယောက်က ငါက တလတလ ဝင်ငွေအလျှင်မှီပေမဲ့
ငါနဲ့လခတူတဲ့ ဟိုဘက်အိမ်ကလူက မာဆတ်သွားရတာနဲ့
လဝက်ဆို ပိုက်ဆံကုန်ပါရော ငါက ဘာမှမလုပ်ဘူး၊အေးအေးဆေးဆေးဘဲ နေလို့ စုတောင်စုမိတယ်
(အမှန်က သူက ဟိုဘက်အိမ်ကလူမကောင်း ဘူးသာပြောနေတာ သူလိုရပ်ကွက်ထဲ လိုက် ဖွ နေတဲ့ သူကိုယ့်သူ
ရင်းနှီးတဲ့လူ ဆိုရင် အဲဒီလိုတခြားသူအကြောင်းအရမ်းလိုက် မပြော သင့်ကြောင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
သိပ်မရင်းနှီးရင်တော့ နားထောင်ရုံနားထောင်တာ နဲ့ သာမန်မှတ်ချက်လောက်ဘဲ ပေးသင့်တယ်။
နောက်တခုက ရင်းနှီးသည်ဖြစ်စေ မရင်းနှီးသည်ဖြစ်စေ သုံးလို့ရတဲ့ နည်းပါ။အဲဒါက
မာဆတ်သွားခြင်း မသွားခြင်း ပေါ်က ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးကို ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။
လူအကြောင်းမပါတဲ့ အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတဲ့ သဘောပေါ့ကွာ။(ဒီဂေဇက်မှာသုံးကြတဲ့နည်းပေါ့)
အဲဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ ခင်ဗျားဟာ လူမှုရေး နားမလည်တဲ့ လူဘဲ။
ဘာကောင်းလဲ၊အသက်သာကြီးတာ အသိတရားမရှိဘူး။ဘယ်လိုလူဘဲ။ ညာလိုလူဘဲလို့
ဆိုတာမျိုး ပြောမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာ ဘောင်ကျော်သွားပြီ ဖြစ်လို့
နောက်ဆုံးတခုပြောချင်တာက လူဆိုတာ သူ့သမိုင်းသူရေးတာမလို့ ပြောစကား ရေးတဲ့စာမှာ
အဲဒီတော့ သူမကောင်းရင်တောင် ကိုယ်ကလိုက်ပြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပါမကောင်းတဲ့
စာရင်းထဲ ပါသွား “တတ်” တယ်ပေါ့။
ကိုယ်ရေးဘူးတဲ့ အေ ဘီ စီ နဲ့ ဆိုရင် စီ ဆိုတဲ့ ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ (ကိုယ်သဘောမတူတဲ့)အရာတွေပေါ်မှာ
အေ ဆိုတဲ့ စိတ်သဘောထားကမောင်း လွှတ်လိုက်တဲ့ ဘီ ဆိုတဲ့ အပြုအမူက ပဋိပက္ခ ဖြစ်မဖြစ် အဆုံးအဖြတ်
မရွှေအိနောက်က လိုက်ပါတယ်… ပို့စ်ကိုသာမက ကွန်မန့်တွေကိုပါ အသေအချာစောင့်ဖတ်ပြီးမှသာ မန့်ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း…
မော်ဒယ်ကောင်မလေး မင်းသမီးလုပ်စားတာ သူ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်
သူ့ စပွန်စာကိုကိုနဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ တူ့နှယ်တယ်နှယ်တာ ပါစင်နယ်
သူတို့နှစ်ယောက် အဆင်ပြေနေတုန်းက အမှတ်တရ မူဗီဆွဲတာ ကျုပ်တို့ ဘယ်သိမတုန်း အဲဒါ သူ့ ပရိုက်ဗယ်စီလေ..
အဲ သူတို့ အဆင်မပြေတော့လို့ စပွန်စာကိုကိုက ရိုက်ထားတဲ့ မူဗီတွေ ယူကျုတင်လိုက်တော့ ကျုပ်တို့အားလုံး ဟိုက်ရှားဘားကြတဲ့အခါ ထရန်စပေရဲင့်စီ ဖြစ်သွားရော ပေါ့
ဟုတ်တရား.. ကိုဖက်ကက်ရေ :hee:
ရွာစားကျော်တဖြစ်လဲ မင်းနန္ဒာရှင်းပြမှပဲ လင်းကနဲ သဘောပေါက်သွားတော့တယ်။ :harr:
plus 1 :hee:
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ဆန် ပရိုက်ဗိတ်စီဖောက်တဲ့အလုပ်ကို ပိုက်ဆံယူပီး လုပ်ကြရအောင်ဗျာ.
ဂေးဇက်က ပရိုင်ဗက်စီ ဆိုရင်တော့ ၀ယ်ချင်ဖူးဗျို့ ………….
ဘာလုပ်ကြမလဲ… သူကြီးဆာဗာက ယူဇာအင်ဖော်မေးရှင်းတွေခိုးပြီးရောင်းစားမလား…ဟိဟိ
ပထမပြောချင်တာက Privacy and Transparency ဆိုတဲ့ Topics သည် အင်မတန်မှ ကျယ်ပြန့် ပါတယ်……
ဒါကြောင့် အကိုပြောတဲ့ ဂေးဇတ်ဘ၀ကိုပဲ ကွက်ပီးပြောသွားပါ့မယ်……
ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဂေးဇတ်ဘ၀ကို Professional Life တခုလို့မမြင်မိပါ……..
ဒါဟာ ကိုယ့် Family Personal တခုလို မြင်မိပါတယ်………
အဲ့ဒါကြောင့် ပြောစရာရှိရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မန့် မိပါတယ်…. Transparency ရှိရှိပေါ့……….
ဒါပေမယ့် Privacy တခုအနေနဲ့တချို့ ကိတ်စတွေကို တော့ မပြောပါဖူး……
အရာ အားလုံးဟာ စာလုံး တလုံးမျှသာဖြစ်ကြောင်း…..
သူတို့ ရဲ့ လစ်မစ် တွေသည် အခြေအနေ အချိန်အခါ အကန့် အသတ် စည်းတခုပေါ်မူတည်ကြောင်း…….
တယောက်နဲ့ တယောက် တချိန်နဲ့တချိန်ကွာမှာပေါ့နော်…………
လောလောဆယ် ပြောချင်တာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ….
ဆက်မန့် ရန်ရှိသေးသည်… စဉ်းစားခန်းဝင်လိုက်ပါအုံးမည်……
လူတိုင်းဟာ မုဆိုးတွေသာဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ ကိုယ့်တောကို နိုင်ဖို့ တော့ လိုတယ်
ဆိုရရင်တော့ ၊ ရှေးတုန်းကရော…ယနေ့ ခေတ်မှာပါ … ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ၊ ကျောင်းတွေမှာ ၊ ရုံးတွေမှာ ၊ ကုမ်ပဏီတွေမှာ ၊ ဈေးဆိုင်တွေမှာ ၊ ဆိုက်ကားဂိတ်မှာ ၊ ကားဂိတ်မှာ ၊ အမျိုးသမီးအဆောင်တွေမှာ ၊ အမျိုးသားအဆောင်တွေမှာ ၊ ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ ၊ အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နဲ့““ ဟိုဟာမကောင်းဘူး ၊ ဒီဟာမကောင်းဘူး ၊ ဟိုလို လုပ်မှကောင်းတာ ၊ ဒီလို လုပ်မှကောင်းတာ ”” ဆိုပြီး ဟောပြောနေတဲ့ သူတွေကို ဂေဇက်ကရွာသူားတွေ နဲ့ဂေဇက်လာ စာဖတ်သူများ .. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အနဲ နဲ့ အများ တွေ့ ခဲ့ကြမှာပါ ။ သူရို့ ကို အနီးကပ်လေ့လာရင်တော့ အဲဒီလိုဟောနေပြောနေတဲ့ လူတွေကိုယ်တိုင် ၊ ကိုယ်ဟောတဲ့ အချက်များကို လိုက်နာနိုင်စွမ်း မရှိတာပါပဲ ။
အဲဒါကတော့ … သည်ပို့ စ်ကို ဖတ်အပြီး ကျွန်တော်နားလည်မိတဲ့ အကြောင်းပါပဲ ( ပို့ စ်ပိုင်ရှင် ပေးချင်တဲ့ အိုင်ဒီယာ ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပေါ့ )
က) ပေးကလန်ဟူသည် ပန်ကလေး (လေးပေါက်ပေးသော အမည်နာမပညတ်)။
ခ) ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးတွင် မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ကြောင်း။
ဂ) အိမ်ထောင်မရှိသူ လူလွတ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း။ (ကျန်သောအသေးစိတ်ကျသောကိစ္စများအား စုံးစမ်းမေးမြန်းခြင်း သည်းမခံပါ)
က) မဖြစ်ညစ်ကျယ် အီးယောင်ဝါး စစ်စတမ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း။
ခ) သို့ကလိုကြောင့် လခစားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အမှုတော်ထမ်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကြောင်း။
ဂ) ဂျပန်စာကို မတောက်တခေါက် ခွေးအလှည်းနင်း အ,အကြီးလက် တံခါးကြားညပ်သကဲ့သို့ အသံထွက်ပီပြင်မှန်ကန်စွာ ပြောဆိုလေပွားတတ်ကြောင်း။
က) မွေးသဖခင် ကျေးဇူးရှင်ခမည်းတော်ကြီးအား အကြွေးငွေအသပြာ တစ်သောင်းကျပ်တိတိ
ခ) ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးမှ တိုက်ဂေါတောဂိုက် ရှေးစတိုင်ရှိတဲ့ပေးကလန်ဟူ၍ အပြောခံခဲ့ရကြောင်း။
ဂ) ကိုယ်ကာယအားကစား ကစားခဲ့ဖူးသောသင်တန်းမှ သင်တန်းဆရာမဖြစ်သူမှ ပေးကလန်၏ နှလုံးသားရေးရာအား မဆီမဆိုင်ဝင်ကလိုင်ကာ စပ်စုမေးမြန်း၍ ကျွဲမြီးတိုခဲ့ကြောင်း။
က) လက်ရှိပစ္စုက္ခ၌ အမ်ပီယူကဒ်ဖြင့် တွေ့လေသမျှ အေတီအမ်စက်များတွင် ငွေအသပြာလိုအပ်၍ ထုတ်လိုသော်လည်း ကဒ်ထဲတွင် ၁၉၉၀ကျပ်သာရှိသောကြောင့် ၉၉၀ကျပ်သာထုတ်ခွင့်ရှိကြောင်း။
ခ) ဘဏ်စာအုပ်နှင့် ယင်းထိုအနှီ၎င်း အမ်ပီယူကဒ်တို့ အာဝါဟ၀ိဝါဟ အချိတ်အဆက် ပြုလုပ်ထားရှိခဲ့ပါသော်လည်းပဲ ထို၎င်းအချိတ်အဆက် အလုပ်မလုပ်သည်ဖြစ်၍ ယ္ခု အတော်အတန်ဘိုင်ပြတ်ကာ စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ပင်ရောက်ရှိနေကြောင်း။
ဂ) ထိုထိုသော အကြောင်းချင်းရာများကြောင့် တစ်ရက်တစ်ရက် ထမင်းစရိတ်သာမက သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ပါ ပြတ်လပ်သည်ဖြစ်ရာ အငတ်ဘေးဆိုက်ကာ ကုန်းကြောင်းကြိတ်ရမည်ဖြစ်၍ ဖခမည်းတော်ထံမှာ ဘတ်၍တဖုံ၊ ပေါ်တင်တောင်း၍တနည်း တဖဲ့ဖဲ့တောင်းကာ အသက်ဆက်နေရကြောင်း။
—–သို့ကလို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါကြောင်းဟူလို။
ပွင့်လင်းထင်သာရှိလှပါတကား နှမတော်ရဲ့ 
ဘုရားသခင် က ကောင်းချီးပေးပါစေကွယ်
ကျနော်ကတော့ သိပ်လည်း မရှင်းဖူးလို့ ထင်နေသလို ခင်ဗျားမေ့နေတာလား တမင်ချန်ထားခဲ့တာလား မသိတဲ့ အချက်ကလေးတခုလဲ လာဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ တောင်းပန်ချင်တာက ကိုပေါက်ရေ ခဏလောက် နာမည်ကို ယူသုံးခွင့် ပေးပါဗျာ။ ကျုပ်က ကျုပ်ရေးတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ လူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ personal life ကိုထည့်ရေးချင်ရင် ရေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား မပြောတာ တခုကျန်ခဲ့တယ်။ အဲဒါက စာရေးသူတယောက် အတွက် အရေးအသားဗျ။ အရေးအသားရဲ့ ပါတဲ့လေသံကို ဖတ်သူက ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ အဲဒီအကြောင်းလဲ ကျုပ်တင်တဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ ဥပမာ အမျိုးမျိုးနဲ့ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။
ဥပမာ ကိုပေါက်က ခရီးသွားရင်း ဓတ်ပုံတွေ ရိုက်တင်တာ ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်ထိ ကျုပ်ဖတ်မိသလောက် သူက ကျုပ်လို ခရီးသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံလူ မလုပ်နိုင်ဖူးတို့ ဓတ်ပုံပညာဆိုတာ IQမြင့်သူမှ တတ်နိုင်တာတို့ မပြောခဲ့ဘူးထင်တယ်။ ထင်တယ် ဆိုတာက ကျုပ်မတွေ့မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တော့ သူပြောလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ ပြောဖူးရင်လည်း ခင်ဗျားပြောပြပေါ့။ တကယ် သူအဲဒီလို ပြောရင်လည်း သူလည်း အဝေဖန်ခံရနိုင်တယ်။(တခါ နှစ်ခါထက် ကျော်လာရင်ပေါ့။ ကိုပေါက်ရေ ဥပမာ အနေနဲ့ နာမည်ကို ယူသုံးရလို့ ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။)
လူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ personal life ကို professional line ပေါ်ကို တင်လို့ရပေမယ့် ဝေဖန်ခံရတယ် မခံရဘူး ဆိုတာတော့ အဲဒီလူရဲ့ အရေးအသားမှာ ပါတဲ့သဘောထားပဲဗျ။ အဲဒါကို ဖတ်သူက ကောင်းကောင်း နားလည်တယ်။ ဥပမာတွေ တခုချင်း မပေးတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်း နားလည်နိုင်လို့။
အဲဒီလို ဝေဖန်ရင်လဲ personal life ကို တိုက်ခိုက်တယ်လို့ ပြောဖို့ခက်တယ်ဗျ။ ပြောချင်လည်း ပြောနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အမြင်တော့ တဘက်က ပါစင်နယ် မဟုတ်ဘူး ဆောင်းပါးရဲ့ အရေးအသားနဲ့ အာဘော်ကို ဝေဖန်တာ ဆိုရင်လဲ သူနိုင်ပြီလို့ထင်တယ်။ ပြင်းပြင်း ဝေဖန်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ တကယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စည်းပေါ်မှာ ခြေစုံရပ်ထားပြီလို့ ကျနော်ထင်တယ်။
အဲဒါ ခင်ဗျားလုံးဝ ထည့်မပြောလို့ ကျနော်ဖြည့်ပေးလိုက်တာ။ အဲဒီ အရေးအသားဟာ စာရေးသူအတွက် personal ရယ် professional ရယ် ခင်ဗျားပြောတဲ့ transparency ကိုခြားထားတဲ့ မျဉ်းပါးပါးလေးပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်အသက်ပဲ။ ချန်ခဲ့လို့ မရလို့ ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်။
ခင်ဗျားပြောတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ အလှူလုပ်တယ်တို့ ဘာတို့ကတော့ ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ စာရေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ မပက်သက်လို့ မပြောတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာလည်း အဲဒီမျဉ်းလေး ရှိနေအုံးမယ်။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားပြောတဲ့ “ဂဇက်ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများတွင် မညီမျှမှုများ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ ရှိနေလျင် ဂဇက်အယ်ဒီတာ ဦးခိုင်ထံသို့ အီးမေးပို့ တိုက်ရိုက်ပြောကြားခွင့်ရှိသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ပို့စ်ထဲတွင် လူကြီးလူကောင်း ပီသစွာ ဆွေးနွေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။” အဲဒါလေး ဆွေးနွေးမယ်ဗျာ။
ပထမဆုံး တိုက်ရိုက်ပြောကြားနိုင်သည် ဆိုတာက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ အရင်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လက်ထက်က မမျှတမှုများကို တိုင်ကြားနိုင်ခွင့် ရှိသည်ဆိုတာမျိုးနဲ့ တူနေတယ်။ သွားတိုင်ရင် မှတ်ပုံတင်တို့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တို့ register လုပ်ပြီးမှ စာပို့ရတာမျိုးပေါ့။ လူတွေက လက်အုပ်လေးတွေ ချီပြီး မင်္ဂလာပါ ဘဘဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့။ လုံးဝ ဆန္ဒပြခွင့် စည်းရုံးဟောပြောခွင့် မရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ သွားတိုင်လည်း လုပ်ချင်မှလုပ်မယ် အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ်အန္တာရယ် ဖြစ်နိုင်တာမျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီဆိုတာတော့ ကျုပ်နားလည်သလိုဆို ဆန္ဒပြခွင့် စည်းရုံးဟောပြောခွင့်တွေလည်း ရှိရမယ် မဟုတ်လား။ အတိုက်အခံကလည်း အာဏာရ အစိုးရကိုတောင် အယုံအကြည်မရှိ အဆိုတင်သွင်းနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ အစိုးရကလည်း လွှတ်တော်ကနေ အချက်အလက်နဲ့ ရှင်းပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်ဒီဆိုက်ဒ်ထဲမှာ ရေးကတည်းက ဒီဆိုက်ဒ်က ဒီမိုဆိုက်ဒ် သူကြီးက လစ်ဘရယ် ဒီမိုသူကြီးဆိုတာ ခဏခဏ ကြားခဲ့ရတာပဲ။ ဒီတော့ ကျုပ်အမြင် လျှို့ဝှက်တိုင်ကြားတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ နည်းကိုတော့ မကြိုက်ဖူးဗျာ။ အဲဒီနည်း သုံးချင်လည်း မန်းဂေဇက်က MI လို့ခေါ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရှိတဲ့ အာဏာရှင်ဆိုက်ဒ် သူကြီးက အဓိပတိ အာဏာရှင် kai လို့နာမည်တပ်ရင်တော့ ပိုသင့်တော်မယ် ထင်တယ်။ မာရှယ်လောနဲ့ အုပ်ချုပ်မယ် ဘာညာပေါ့ဗျာ။
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ကျုပ်ပြောဖူးတယ်။ တယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ဝေဖန်လို့ ပြန်လည်းမချေပနိုင် လျစ်လျှူလဲ မရှုနိုင် ရယ်လဲ မရယ်နိုင်ဖူးဆိုရင် ကိုယ်က အဲဒီလူ ပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ အာဏာရှင်တွေလဲ တကယ်အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်နေလို့ သူတို့အကြောင်းကို ပြောရင် ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပဲ။
“ပို့စ်ထဲတွင် လူကြီးလူကောင်း ပီသစွာ ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်” ဆိုတာတော့ ကိုယ်လိုသလို ဆွဲပြီးယူနိုင်တဲ့ အနေအထားပဲ။ တဘက်လူက ဆွေးနွေးတာ လူကြီးလူကောင်း မဆန်ဘူး ဝေဖန်တာ မှားနေရင် ကိုယ်ကလည်း ချက်နဲ့လက်နဲ့ ပြန်ချေပပေါ့။ သူငိုင်သွားအောင် ပြောပေါ့။ ဒါမှ ဒီမိုဖြစ်မှာပေါ့။ ပြောလည်း မပြောနိုင် ခံရလည်း ခက်နေရင်တော့ မှန်နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ပို့စ်ကောင်းကလေးမှာ ဆွေးနွေးခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျုပ်ကျန်သူတွေရဲ့ အမြင်လေးတွေ နားထောင်လိုက်အုံးမယ်။
မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုသလို စာစီတာလေး အဓိပ္ပါယ်တမျိုး ဖြစ်နေတယ်ထင်လို့ ပြင်ကြည့်မယ်ဗျာ။ အကြံပေးတာပါ။ ခင်ဗျားရေးတဲ့ ဒီစာပိုဒ်က အဓိပ္ပါယ်တမျိုးကြီးလိုပဲ။ ခင်ဗျားရေးတာက “ဂဇက်ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာသင့်သည်။ ထပ်ပြောရလျှင် ဂဇက်မှ ကော်မန့်တခုအတွက် ပို့စ်တခုအတွက် အခကြေးငွေ ပေးထားသည်။” အဲဒီစာပိုဒ်ကို ကျနော်စာသားလည်း မပြောင်းဘူး ရှေ့နဲ့နောက်လည်း မပြောင်းဘူးနော်။ စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီး ရုတ်တရက် ဒီလို အတွေးမျိုး ဝင်လာနိုင်တယ်ဗျ။ ကျုပ်ပြောကြည့်မယ် “ဂဇက်မှ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာရမယ်။ ဘာကြောင့် လိုက်နာသင့်တာလဲ။ ခင်ဗျားတို့ကို ကျုပ်တို့က ငွေပေးထားလို့။” ဟာ တမျိုးကြီးလိုပဲဗျာ။
ခင်ဗျားကတော့ ဒီလို အမြင်နဲ့ရေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုကြောင်ဝတုတ်က တကယ့်ကို ခေတ်မီတဲ့ လူအခွင့်အရေးသမား တယောက်ဆိုတာ ကျနော်က ကောင်းကောင်းသိတယ်လေ။ မိုးပြာ ဆရာတွေကို သူများတွေ ဆဲတုန်းကတောင် ကိုကြောင်ဝတုတ်က ဒါမှားတယ်။ နည်းလမ်းကျကျ သူတို့ကောင်းတာတွေကို နားထောင်သင့်တယ် ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့ပါသော်ကော။
ဒီလို ငွေပေးထားလို့ ဆိုတဲ့ အနိုင်ကျင့်တဲ့ စကားမျိုးတော့ ဘယ်ပြောပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် အခုမှ ဖတ်တဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ ရှေ့ပို့စ်တွေကို မဖတ်ဘူးသူ တယောက်က အထင်မှားပြီး “ဟာ ဒီမိုဆိုက်ဒ်ဆို ဘယ်သူက ငွေတောင်းနေလို့လဲ။ ငွေကကော ဘယ်လောက် များနေလို့လဲ” တွေ ပြောရင်တော့ သေပြီဆရာပဲ။ မတော်ရင် အာဏာရှင်စိတ်ဓတ် ဓနရှင်ပေါက်စအမြင် ရှိတယ်လို့တောင် ထင်သွားနိုင်တယ်။
အဲဒီတော့ ရွာသူရွာသားတို့ရေ အဲဒီစာသားကို ဖတ်ပြီး အဲဒီလို အတွေးမှားမျိုး မတွေးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်ကွယ်။ တွေးတောကြစေလိုပါတယ် ဌဲ ဌဲ ဌဲ။
ပြည့် ပြည့် ဝဝ နားလည်မှုပေး
ဒါဆို ရွာထဲသာမက လုပ်ငန်းခွင်မှာပါ အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါရဲ့ 
ကိုဆာမိကလဲဗျာ အကျိုးမရှိပဲ ငြင်းတယ်လို့ မထင်စမ်းပါနဲ့ မိတ်ဆွေကြီးရ။ ဒါက အမှန်အကန် ဆွေးနွေးနေတာ။ ဒါမျိုးက ကြုံတုန်းဆွေးနွေးရတယ်။ တော်ကြာ ခဏနေမှ ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကို ရွာထဲက အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်တဲ့သူတွေကို ဖတ်စေချင်
လိုက်တာတော်လို့စာလုံးမည်းကြီးနဲ့ ပြောရင် အလကားနေရင်း သံသယပွားများပြီး ဒုက္ခတွေ များနေအုံးမယ်။ အခုကျတော့ ဖတ်မှန်း လူတွေသိသွားတော့ ဟော ဒါငါ့ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဖတ်ပြီးပြီ။ ငါက အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပျော်ရတာပေါ့ ဟဲ ဟဲ။
လူတယောက်ရဲ့ပရိုက်ဗေစီကို သူလိုချင်တဲ့ အတိုင်းတာတခုရောက်ဖို့
ဝေဖန်စေချင်တာ သို့မဟုတ် သိစေချင်လို့ချပြတာ
ပြောပြချင်ရုံသက်သက်ရည်ရွယ်တာ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိနိုင်ပါတယ်။
ကို့ရဲ့ကိုရေးကိုတာကို လူမြင်အောင်ထုတ်ပြတယ်ဆိုကတည်းက အိုက်ဒါနဲ့ပတ်သတ်လို့
ဝေဖန်ခံဖို့ အပြန်လှန်ဆွေးနွေးဖို့ သူ့မှာယုံကြည်မှုရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ကျမအမြင်ကတော့ ကိုရေးကိုတာကိတ်စတွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့မရောထွေးလိုက်သင့်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ Personal & Professional ဟာသီးခြားစီဖြစ်တည်နေတဲ့ သဘောတရားရှိပြီး
Privacy & Transparency ကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ခြင်းစီရဲ့ သဘောထားအမြင်နဲ့သာ
သက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ အိုက်ဒီအမြင်ပေါ်မှာ ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်တော့
ဝေဖန်လိုသူဟာ သူတပါးရဲ့ ပါဆင်နယ်ကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နှောင့်ယှက်ခြင်း
ဖတ်လဲဖတ်ပါ… တွေးလဲတွေးပါ… ပြီးရင်ဘာတွေတွေးနေလဲ ပြန်ပြောဦးနော်….
(၃)ခေါက်ပြည့်အောင်ဖတ်ပြီးမယ့်အချိန်နဲ့ မတူသောအမြင်များကို စောင့်နေပါတယ်နော်…
လူဆိုတာ သူ့သမိုင်းသူရေးတာမလို့ ပြောစကား ရေးတဲ့စာမှာ
အဲဒါစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့တင် ကျွန်တော့ပိုစ့်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ…
P&P တုန်းက ကျွန်တော့်ဇတ်ဆောင်မွန်မွန်ပဲလေ… တိုက်ဆိုင်မှုပေါ့…
ကော်မန့်တွေလဲများလာပြီ… ယဉ်ကျေးမှုတို့ မြန်မာ့ရိုးရာထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းစာရေးကောင်းတဲ့မွန်မွန်ရော…
ဒီနေရာမှာ ဘာတွေများပြောချင်ပါသေးတုန်းဗျာ… မျှော်နေမယ်နော်….
အရင်တုန်းက ရင်းနီးတဲ့နာမည်ပဲခေါ်လိုက်တယ်နော်… မင်းနန္ဒာဆိုတော့ နဲနဲများဒဏ္ဍာရီဆန်နေသလားလို့…
ခင်ဗျားကော်မန့်မှာသတိပြုမိရင် Professional, Personal, Privacy နဲ့ Transparency က တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မျဉ်းပါးပါးလေးတစ်ချောင်းထဲနဲ့ ခြားထားတာပါ… The thin red line ပေါ့… (ရုပ်ရှင်နာမည်မဟုတ်ပါ…ဟိ)… ကော်မန့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…
မနှင်းနှင်းရဲ့ Plus 1 ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံရရှိပါကြောင်း…
ဒါပေမယ့် ဂဇက်ကလူပေါင်းများစွာရဲ့ အသိဥာဏ်တွေ… လူပေါင်းများစွာရဲ့ခံစားချက်တွေ…
လူပေါင်းများစွာရဲ့ခံယူမှုတွေနဲ့ထောက်မထားတာမို့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး…
အဲဒီလိုပဲ နေ့ချင်းညချင်းမဟုတ်ဘဲ စွဲလမ်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလဲ ချက်ချင်းခေါင်းထဲက ထုတ်လို့မရပါဘူး…
ဖြစ်စေချင်တာကတော့ သေချာစဉ်းစားပြီး… ပြုပြင်သွားကြဖို့ပါပဲ…
ဒါနဲ့စကားမစပ်… ဆြာပေ ကြယ်လေးလုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ… ဂုဏ်ပြုပါတယ်နော်…
Transparency ဆိုတာ လူတိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ကိစ္စပါ…
Transparency ဖြစ်လာဖို့ Secret (Privacy) တို့ရှိရမှာပေါ့လေ… အားလုံးကဆက်စပ်နေပါတယ်…
နောက်ဆုံးတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသော… သည်းခံခြင်းပါ…
သည်းခံခြင်းရဲ့နောက်မှာ ဥပက္ခာပြုခြင်းဆိုတာ ကပ်ပါလာတတ်တယ်… ဒါလေးကို သတိချပ်ကြသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်… အစ်ကိုထောက်ပြသွားတာလေးက အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ…
ဒီမှာ ဆွေးနွေးစရာလေးတွေ ပိုများလာတာမို့ အစ်ကိုတို့နှစ်ယောက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တာပါ…
Professional ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို အရင်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြည့်ရင်… မြန်မာလိုဘာသာပြန်ကြည့်ရင်…
“ကြေးစား” လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်… မိမိလုပ်ဆောင်လိုက်သောအပြုအမူ အလုပ်တစ်ခုအတွက် အခကြေးငွေ တစ်စုံတရာလက်ခံရှိပြီဆိုတာနဲ့ သူသည်ထိုအလုပ်ကို Professional ပြုလုပ်သူလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်…
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ကစာရေးခြင်းအမှုကို ဂဇက်မှပြုလုပ်တယ်…
ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံတွေချပြတယ်… အသိပညာတွေမျှဝေတယ်… သူများအတွေ့အကြုံတွေကနေ သင်ခန်းစာတွေရတယ်… သူများအသိပညာတွေကို ဆွပေးနှိုက်ယူလုပ်တယ်… (ခွက်ဒစ်တူ-ကိုရဲစည်)…
အဲဒီတော့ ဂဇက်မှာ Active ဖြစ်နေသော… ၀ါသနာအရ (Hobby)စာရေးနေသော်လဲ… အခကြေးငွေ တစ်စုံတစ်ရာရခြင်းနဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ဗဟုသုတရရှိခြင်းနဲ့ လက်ရှိအလုပ်အတွက် အကျိုးတစ်စုံ တစ်ရာရရှိနေတာဖြစ်လို့ Professional လို့ဆိုချင်ပါတယ်…
အဲဒီတော့ ကိုတိမ်မည်းပြောတဲ့ ဂဇက်ဟာ Professional မဟုတ်ပါဘူး… Personal ပါဆိုတာကို ငြင်းရပါလိမ့်မယ်…
ဂဇက်နဲ့ စာအုပ်မျက်နှာကိုယှဉ်ကြည့်ပါစို့… ဘယ်ဟာက Pro ပိုဆန်လဲဆိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက အထက်မှာပြောခဲ့ဖူးတဲ့ The Thin Red Line ပါ…
အရေးအသားဟာ စာရေးသူအတွက် personal ရယ် professional ရယ် ခင်ဗျားပြောတဲ့ transparency ကိုခြားထားတဲ့ မျဉ်းပါးပါးလေးပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်အသက်ပဲ။ ချန်ခဲ့လို့ မရလို့ ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်။
တယောက်နဲ့ တယောက် တချိန်နဲ့တချိန်ကွာမှာပေါ့နော်….
အဲဒီမျဉ်းလေးကို ဘယ်သူက စဖြတ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဒီအဖြေကိုထုတ်ရပါတော့မယ်…
ဥပမာ… ကျွန်တော်ကြောင်ဝတုတ်မှာ လမ်ဘော်ဂီနီကား (၁၀)စီးရှိကြောင်း… ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို နှစ်ပတ်ခြားတစ်ခါပတ်ကြည့်ကြောင်း… ကျွန်တော်သည်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကနေ စီးပွားရေးဘွဲ့တစ်ခုရသော်လဲ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကိုသနားသဖြင့်… သူတို့အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ များကိုအခမဲ့လိုက်လံဟောပြောနေကြောင်း… မကြာမီပင် မီလီဆိုင်းရပ်နှင့်မင်္ဂလာဆောင်တော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း အမှန်လဲရှိ၏… အပိုလဲပါ၏…ဂဇက်ပေါ်တွင် မစားရ၀ခမ်းကြွားလုံးထုတ်သည်ဆိုပါစို့…
ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံနှင့်တပ်ထားသောအင်တာနက်မှ ကိုယ့်အကောင့်ပေါ်တွင် ကိုယ်တင်သည်ပဲ… ဘေးအိမ်က ၀ိုင်ယာလက်ခိုးသုံးချင်သုံးဦးမှာနော်… စာရေးသူအနေနဲ့ ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်စရာမလိုပါ… ထိုသူကို ကြွားလှချည့် သောက်မြင်ကပ်အောင်ပြောလှချည့်ဆိုပြီး ကိုစံလှကြီးအနေနဲ့ ဘာမှပြောလို့မရပါဘူး… ဘာပဲလုပ်လို့ရမယ်လိုဆိုရရင် နောက်သူရေးသောစာများကို မဖတ်ဘဲပစ်ထားလိုက်ရုံသာရှိပါသည်…
ဒါကိုလူ့အခွင့်အရေးလို့ပဲပြောရတော့မည်… လူတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်… သို့သော် မိမိပြုမူမှုအတွက် မိမိ၌သာတာဝန်အပြည့်ရှိပြီး ထိုတာဝန်ကိုမလွဲမသွေထမ်းဆောင်ရမည်… ဤအရာကားလူ့အခွင့်အရေး ဟုဆိုရမည်…
ဒါဆိုရင် ဝေဖန်သူကို အပြစ်ပြောပါသလားဆိုရင် ကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါ… ဝေဖန်သူသည် သူ့ဝေဖန်မှု အပေါ်တာဝန်ယူရမည်… ဝေဖန်သူကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူ… The Thin Red Line ကို မိမိမှ စဖြတ်သူဆိုပြီးပြောရင်ဖြင့် ဝေဖန်သူသာခံရမည်ဖြစ်သည်… နောက်ဆုံးတော့ မိမိပြုမူမှုကို မိမိတာဝန်ယူရမည်သာဖြစ်ပါသည်… အဲဒီတော့ ဝေဖန်မှုက မိမိအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလဲ
“ဂဇက်မှ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာရမယ်။ ဘာကြောင့် လိုက်နာသင့်တာလဲ။ ခင်ဗျားတို့ကို ကျုပ်တို့က ငွေပေးထားလို့။” ဟာ တမျိုးကြီးလိုပဲဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ထုံးစံအတိုင်းဂဇက်ကို ရွာကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်… တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီရွာကြီးဟာ မြို့တစ်မြို့ဖြစ် လာတော့မယ်… ဒီထက်ကြီးလာရင် ဂဇက်နိုင်ငံတော်လို့သတ်မှတ်ချင်သတ်မှတ်မယ်…
ကဲ… ဂဇက်အကောင့်တစ်ခုနဲ့ Password တစ်ခုရှိတိုင်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဂဇက်ရဲ့ရွာသား… ဂဇက်ရဲ့မြို့သား… ဂဇက်ရဲ့နိုင်ငံသားပါပဲ…
နိုင်ငံသားတိုင်း ဂဇက်ရဲ့ချာတာကိုလိုက်နာရမယ်… ဂဇက်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လက်မဲ့မရှိရလေအောင်…
စီးပွားရေအနေနဲ့ ငွေရပေါက်ရလမ်း တနည်းအားဖြင့် စီးပွားရေးရှိအောင်လုပ်ပေးထားတယ်…
အဲဒီတော့ ဂဇက်နိုင်ငံသားက ဂဇက်ရဲ့ချာတာ… ဂဇက်ရဲ့အခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာရမယ်…
ဥပဒေမရှိဘဲ… တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲ… ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝသောနိုင်ငံတနိုင်ငံဖော်ဆောင်မရသလို… တရားဥပဒေမရှိသောဂဇက်မှာလဲ ဒီမိုကရေစီမရနိုင်ပါဘူး…
ကျုပ်ဒီဆိုက်ဒ်ထဲမှာ ရေးကတည်းက ဒီဆိုက်ဒ်က ဒီမိုဆိုက်ဒ် သူကြီးက လစ်ဘရယ် ဒီမိုသူကြီးဆိုတာ ခဏခဏ ကြားခဲ့ရတာပဲ။ ဒီတော့ ကျုပ်အမြင် လျှို့ဝှက်တိုင်ကြားတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ နည်းကိုတော့ မကြိုက်ဖူးဗျာ။ အဲဒီနည်း သုံးချင်လည်း မန်းဂေဇက်က MI လို့ခေါ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရှိတဲ့ အာဏာရှင်ဆိုက်ဒ် သူကြီးက အဓိပတိ အာဏာရှင် kai လို့နာမည်တပ်ရင်တော့ ပိုသင့်တော်မယ် ထင်တယ်။ မာရှယ်လောနဲ့ အုပ်ချုပ်မယ် ဘာညာပေါ့ဗျာ။
တကယ်လို့များ ကိုစံလှကြီးအနေနဲ့ ဂဇက်ရဲ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်…
ဂဇက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခွင့်ရတဲ့သူတစ်ယောက် အရင်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်…
အဲဒီလို ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တိုင်ကြားခွင့်ကလွဲရင် ဘာမှမရှိပါဘူး…
နောက်တစ်ခုက ဂဇက်မှာ MI မရှိဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံထားသလို… စည်းကမ်းထိန်းပေးနေတဲ့ ဂဇက်ရဲတပ်ဖွဲ့ (MGPD) လေးတော့ရှိပါတယ်… အဲဒီ MGPD မှာ လာဒ်မစားသော ဘက်မလိုက်တတ်သောအဖွဲ့လေးဆိုတာကိုလဲ ယုံကြည်စေချင်တယ်…
အဲဒီအဖွဲ့လေးကို ဘာလို့ထားရလဲဆိုရင် ဂဇက်ရဲ့လုံခြုံရေး… Mandalay Gazette National Security ကြောင့်ပါပဲ… အဲဒီလူတွေအားလုံးက ဂဇက်မန်ဘာတွေကို ယခုအချိန်အထိ ဒုက္ခမပေးပါဘူး… ဂဇက်ကို ဒုက္ခရောက်စေနိုင်သူတွေကိုသာ ထိန်းသိမ်းတာပါ… ဒါက Security Issue ပါ… အာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်ပါဘူး…
Kai ဆိုတဲ့ သူကြီးကို ဒီမိုဆန်တဲ့သူကြီးလို့ ကျွန်တော်ထုတ်ပြစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်…
ဒါဆိုရင် စွတ်စွဲမိသူက ဒီမိုကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲတော့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်…
တကယ်လို့များ ဒီမိုမဆန်ခဲ့ရင် ကိုစံလှကြီးရဲ့အကောင့်က အခုအချိန်မှာမရှိတော့ပါဘူး… အဲဒီလိုပဲ… ရွာကိုဆူအောင် ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Member တွေရဲ့အကောင့်တွေအကုန်… အခုအချိန်အထိ သုံးလို့ရနေပါသေးတယ်… အဲဒီတစ်ချက်နဲ့တင် အာဏာရှင်မဟုတ်ဘူးလို့ အခိုင်အမာပြောနိုင်ပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ အခုအချိန်အထိ ကိုစံလှကြီးကို လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့် လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်ပေးထား ပါတယ်နော်… အခု ကျွန်တော့်ပိုစ့်မှာ ကိုစံလှကြီးဝင်ရေးနေနိုင်တာကိုက Kai ဆိုသောသူကြီးက ဒီမိုဆန် ဆန်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပါဗျာ…
တကယ်လို့များ အတိုင်အခံတစ်ယောက်အနေနဲ့ Kai ခေါ်သူကြီးကို ယှဉ်ပြိုင်ပြီး မဲရွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်… ကိုစံလှကြီး သူကြီးဖြစ်ခွင့်ရှိနိုင်ပါတယ်…
သူကြီးလဲ ပင်ပန်းလှရောပေါ့… သူကြီးဆိုတဲ့ President of the Mandalay Gazette ရာထူးကြီးကို ဒီတစ်ခေါက်သမ္မတသက်တမ်းကုန်ခါနီးရင် လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲလေး လုပ်ပေးသင့်ပါပြီထင်ပါ့…
အဲဒီတော့ ကိုစံလှကြီးလဲ… ဂဇက်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ချင်သူမို့… လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်အောင်… ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်…
အတိုက်အခံကလည်း အာဏာရ အစိုးရကိုတောင် အယုံအကြည်မရှိ အဆိုတင်သွင်းနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ အစိုးရကလည်း လွှတ်တော်ကနေ အချက်အလက်နဲ့ ရှင်းပေါ့ဗျာ။
လွှတ်တော်ကို တိုက်ရိုက်တိုင်စာလေးများပေးပို့ခွင့်နဲ့ ဆွေးနွေးခွင့်အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးသင့်ပြီထင်ပါ့…
ဂဇက်လွှတ်တော်ဆိုပြီး ပိုစ့်တစ်ခုနဲ့ မဟာအံစာတုံးရဲ့ ယနေ့ပိုစ့်အောက်မှာ အမြဲတမ်းစတစ်ကီးပေးထား သင့်ပြီထင်ပါကြောင်း… ဒီအဆိုကို လွှတ်တော်မှဆုံးဖြတ်စေလိုပါတယ်လို့… ဒီနေရာကနေ ဒီမိုနိုင်ငံအတွက် ပိုကောင်းမယ့်ခြေလှမ်းကို အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်…
Professional vs Personal ကိတ်စ ဆိုတာကို ပြောပါရစေ…..
Professional ဆိုတာ ကြေးစား ဟုမှတ်ရပီး ပိုက်ဆံရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ….
ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်ကို Professional ဟုမှတ်ယူပါသည်……
ဒါပေမယ့် Personal ဆိုတာကတော့ ဆန်ကျင့်ဘက်ပါပဲ…..
ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားမှူ ဝေဖန်မှူ လုပ်ဆောင်မှူ သွားလာမှူလို့ ဆိုချင်တယ်…..
ဂေးဇက်တွေ မှာ စည်းကမ်းတွေရှိတယ်….
အဲ့လိုပဲ အိမ်မှာ လည်း စည်းကမ်းရှိတယ်…
လမ်း မှာလည်း စည်းကမ်းရှိတယ်…..
စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာရယုံနဲ့Professional လို မဆိုနိုင်ဖူး…….
သဂျီးက ကျွန်တော့်ကို တိမ်မည်း မင်း ကဗျာပဲရေး စာမရေးနဲ့ လို့ လဲမပြောသလို …..
ကျွန်တော့်မှာ JD လည်း မရှိဖူး…. ToR လည်း မရှိဖူး……
ပီးတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်လည်း မဟုတ်တဲ့အတွက်…..
Personal လို့ ခံယူထားတယ်…..
လောလောဆယ် ကိတ်စမှာ Personal Professional Privacy Transparency ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးလုံးပဲ သုံးနေလို့ … Personal ဆိုတဲ့ အနီးစပ်ဆုံး စာလုံးကို ယူသုံးလိုက်ခြင်းပါပဲ……
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း အကျုံးဝင်တာက Amateur ပါ…
အပျော်တမ်းသမား တယောက်အနေနဲ့Professional လို့ လည်း မခံယူနိုင်ကြောင်း….
ဂေးဇက်မှာ တခြားခြား Professional Writer တို့ နဲ့ လည်း တန်းတူ တခုံတည်း မထိုင်ရဲကြောင်း….
ထိုကြောင့် ဂေးဇက်သည် ကျွန်တော့်ရဲ့ Personal Amateur Life သာဖြစ်ကြောင်း…..
ဂေးဇက်ကို Personal ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်း…………
အခုဆိုရင်တော့ အကိုပြောတဲ့ Thin Red Line ကိတ်စလဲ ရှင်းမည်ဟုထင်ကြောင်း….
တကယ်တော့ အားလုံးဟာ နားလည်မှူတခုသာ မူတည်ကြောင်း…..
မသိပဲစာသားယူသုံးမိယုံနဲ့Privacy ချိုးဖောက်ခြင်း…..
စာကြီးပေကြီး သုံးယုံနဲ့Professional ဆန်သည်….
ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀တစိတ်တပိုင်း မဖော်ပြယုံနဲ့Transparency မရှိ…..
အရာအားလုံးဟာ နားလည်မှူ Understand နဲ့ သာ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်…………
အဲ့ဒီအကြောင်းကို Duty & Responsibility အကြောင်းဆက်ရေးပါဦးမယ်…
မကြာမီ… လာမည်… မျှော်ပေါ့လေ…
Mandalay Gazette = မန်းဒလေး ဂဇက်ဟု အသံထွက်ပါသည်။ :harr:
ဘယ်လိုထွက်ချင်သေးလို့တုန်း… မန်းဒလေးဂေဇက်တီး လို့ထွက်ချင်သေးလို့လား…
MaMa ငါ့ကို ဆော်သွားမှ….
ဂေးဇာတ် = Gay Opera
ဂဇက်မှ ကဇာတ် ဟုတ်ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ရန် လမ်းကြောင်းရှာခြင်းဖြစ်သည်…..
ဟာ တယ်ဟုတ်ပါလား ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ
Professioanl ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို ပထမဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖော်ကြည့်ရင် “ကြေးစား” လို့အဓိပ္ပါယ် ရတယ်လို့ ခင်ဗျားပြောတယ်နော်။ အဲဒီ စကားလုံးကို အဲဒီလို ဘာသာပြန်တာကို အခုထိ ငြင်းနေတုန်းပဲ။ ကျုပ်က မြန်မာလို အဲဒီလို ပြန်တာကို သိပ်မကြိုက်ဖူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ စကားလုံးက တော်တော်လေး မကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်တယ်။ မြန်မာပြည်က အင်္ဂလိပ်စာ ပညာရှင်တချို့လည်း မကြိုက်ဖူးလို့ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ ထားပါ။ ကျုပ်က အင်္ဂလိပ်လို မကျွမ်းလို့ Cambridge Advanced Learner’s Dictionar ထဲက စကားလုံးတွေကို ဖတ်ပြီး ရေးကြည့်တယ်ဗျာ။
1.	A person who has the type of job that needsahigh level of education and training
2.	(informal) someone who has worked hard in the same type of job foralong time and has become skilled at dealing with any problem that might happen
3.	A person who doesajob that people usually do asahobby
4.	A sportsperson especiallyagolf or tennis player who is employed byaclub
ပထမအချက်တော့ ဒီနေရာနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ဒုတိယ အချက်အရလည်း အလုပ်တခုတည်းကို စွဲမြဲစွာလုပ်ပြီး ရလာတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်သူ ဆိုတော့လည်း ဒီမှာရေးနေတဲ့ လူတွေက တခြားလုပ်ငန်းတွေ ရှိပြီးမှ ရေးနေကြတာများတယ်။ အပြင်က တကယ့်စာရေးဆရာလဲ ပါချင်ပါမယ်ပေါ့။ နည်းတော့ နည်းမှာပါ။ သိပ်မသေချာဘူး။ တတိယအချက်အရ သူများဝါဿနာအလျောက် လုပ်တဲ့အလုပ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အဖြစ်လုပ်တဲ့လူ ဆိုတော့လည်း သိပ်မဆီလျော်ဘူး။ မန်းဂေဇက်က ပိုက်ဆံ ဆိုတာက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်လို့ ရနိုင်တာမှ မဟုတ်ပဲ။ နောက်တချက်က အားကစားသမား ဆိုတော့လည်း ဒီနေရာနဲ့ မဆီလျော်ဘူး။
ခင်ဗျားပြောတဲ့ အသိပညာ အတတ်ပညာ ဗဟုသုတရရှိခြင်းဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ လက်ရှိလူတွေ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ဆိုင်ချင်မှဆိုင်မယ်။ ပြောတဲ့ professional ဆိုတဲ့ လူဟာလည်း သူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းမှာ အရည်အသွေးတိုးတတ်လာမှပဲ ခင်ဗျားပြောတဲ့ဟာနဲ့ ညီမယ်။ ကျုပ်ပြောမယ်။ ကျုပ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့စာတော့ မန်းဂေဇက်မှာ ယောင်ယောင်လေးတောင် မတွေ့မိဘူး။ အခြားလူတွေလဲ ဒီလိုပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားအတွက်တော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ပေါ့။ ခင်ဗျား ရတယ် မရဘူး ကျုပ်လဲ မသိနိုင်ဘူးလေ။
ထားပါ။ ခင်ဗျား ပြောသလို ကြေးစားပဲ ဆိုပါတော့။ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ မမေ့ဖို့က တကယ် professional ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကြေးစားဆိုတဲ့လူဟာ သူလိုချင်တဲ့ အခကြေးငွေ အခွင့်အရေးကို သူ့ဘာသာတောင်းပြီး ကြိုက်မှလက်တွဲတာဗျ။ ဘောလုံးသမားဆိုလဲ ဘယ်လောက် စာရေးဆရာဆိုလဲ စာမူတပုဒ် ဘယ်လောက်စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကျန်တဲ့လူတွေလဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ စကားအတိုင်း စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ဒီမှာ စာလာရေးနေတဲ့ လူတွေက စရေးကတည်းက ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှလို့ တောင်းလို့လား။ ခင်ဗျားတို့ဘာသာ သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်နှစ်ကျပ် ဘာညာနဲ့ ပေးတာမဟုတ်လား။ မန်ဘာဝင်ရင် ပွိုင့်ဘယ်လောက် ဆိုတာလဲ သူတို့က တောင်းတာလား။ ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ စည်းကမ်းလုပ်ပြီး ပေးထားတာ မဟုတ်လား။ အဲဒီလို ပြောကြေးဆို ခင်ဗျားတို့ပိုက်ဆံကရော ဘယ်လောက်များ များနေလို့လဲ။ သုံးလို့ရော ရရဲ့လား။ စိတ်မဆိုးနဲ့ ဒီစကားတွေက ခင်ဗျားတို့ အရင်စပြောတာ။
ခင်ဗျားတို့ လုပ်ပုံက ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အလှူလုပ်တယ်ဆိုပြီး ထမင်းဖိတ်ကျွေးပြီးမှ လာချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် လူမှုရေးအရဖြစ်ဖြစ် စားမိတဲ့လူတွေကို ငါ့ထမင်းစားတော့ ငါ့အလုပ်လုပ်ပေးစမ်းလို့ ပြောသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဟိုတလောက ဦးခင်ရွှေ ပြောသလို သတင်းသမားတွေကို ဖိတ်ပြီး ရှင်းလင်းပွဲလိုလုပ်ပြီး ချကျွေးတာကို လူမှုရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့မှာတွေ့လို့ဖြစ်ဖြစ် စားမိတဲ့ သတင်းသမားတွေကို ပေးတာ ကျွေးတာစားပြီး ရေးချင်ရာ ရေးတဲ့လူတွေလို့ ပြောသလို ဖြစ်နေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ကျေးဇူးကြီးပါပေ့ဗျာ။ ကျေးဇူးတော် အနန္တပါပဲ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆိုတာ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဆရာရဲ့။
အဲဒီမျဉ်းကို ဘယ်သူ ဖြတ်သလဲ ဆိုတာတော့ ပြောရရင် သူသူကိုယ်ကိုယ် ရှိကြတာပဲဗျ။ ခင်ဗျားတို့ကဘက်က စဖြတ်တော့ awareness ရစေချင်လို့ အိပ်ပျော်နေသူကို ရေနဲ့ပက်နှိုးတာ သူများက ဖြတ်တော့ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်သူ ဖြစ်သွားရော။
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ကျုပ်ပြောတာ မမေ့နဲ့ဗျ။ စာရေးသူဟာ အပျော်တမ်းရေးသူဖြစ်ဖြစ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေးသူပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့စာထဲမှာပါတဲ့ အရေးအသားနဲ့ အာဘော်ကို စာဖတ်သူက ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ်က ခိုင်ရင်တော့ ပြန်ဖြည်လိုက်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားဘဝကို ခင်ဗျားကြွားရေးရင် ဝေဖန်ခံရချင် ခံရမယ်။ ဝေဖန်သူက ခင်ဗျားရဲ့ အရေးအသားကို ဝေဖန်တာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျနော့်အမြင်အရတော့ အဲဒီလူဟာ ဘောင်ထဲမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် တော်တော်နဲ့တော့ ကြွားရေးလည်း ဘယ်သူမှတော့ မဝေဖန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူက တခုခု(ဥပမာ တဘက်လူကိုဖြစ်စေ သူတန်ဖိုးထားတာ တခုခုကိုဖြစ်စေ) ဝေဖန်ရင် တဘက်လူကလဲ ပြန်ဝေဖန်လိမ့်မယ်။
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ကျုပ်အသေးစိတ် မပြောတော့ဘူး။ The thin red line ကိုစဖြတ်သူတွေထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ဘော်ဘော်တွေ အများကြ်ီးပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ ကိုယ်က လုပ်တော့ awareness ရစေချင်လို့ ခင်ဗျားတို့ ပြောနေကျလေ။
တခြားလူက မန့်တာတော့ ကျုပ်မပြောချင်ဘူးဗျာ။ ခင်ဗျား ကြည်ညိုသူရဲ့ စကားကို ခင်ဗျားကိုးကားတာတော့ ခင်ဗျားအခွင့်အရေးပါ။ ကျုပ်ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျုပ်က ပို့စ်ကို လာတာက ပို့စ်ပိုင်ရှင်နဲ့ပဲ ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတော့ ကျန့်တဲ့လူတွေ အသာနေပါ။ ကျုပ်နဲ့ မခင်ရင် ကျုပ်ပြန်မဖြေဘူး။ အာရုံပြားလို့။
အဲဒီလို စကားမျိုးကတော့ ခင်ဗျားတို့တွေ ပြောနေကျလေ။ ကိုယ်က စရင် အိပ်ပျော်သူကို ရေနဲ့ပက်နှိုးတာ သူများက ဝေဖန်ရင်တော့ သူများမကောင်းတာ ကိုယ်ကဝေဖန်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ မေတ္တာပို့ပါ ဘာညာပေါ့။ အခု ကျုပ်မကောင်းတာတွေကို ခင်ဗျားတခုချင်း ပြန်ချေမယ့်အစား ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီး မေတ္တာပို့ပါလားဗျာ။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ဒီဝါဒ လက်ကိုင်ထားတဲ့ မေတ္တာသမားပဲ။ ကျုပ်ကတော့ ခင်ဗျားတို့လို မေတ္တာသမား မဟုတ်တော့ လိုက်နာစရာ မလိုဘူးလေ။
အဲဒီလိုဆို ခင်ဗျားပြောမှာပေါ့။ ကျနော့်ရဲ့ အရေးအသားကို ထောက်ပြတာလို့။ ခင်ဗျားတို့ စည်းကမ်းလည်း ဒီလိုပေါ့ဗျာ။ ဝေဖန်သူက လူကို ဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေးအသားနဲ့ အာဘော်ကို ထောက်ပြကြတာပါ။
ဂဇက်နိုင်ငံတော်မှာ စီးပွားရေးအနေနဲ့ ငွေရပေါက်ရလမ်း ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ ခင်ဗျားပြောတယ်နော်။ ငွေစကားတော့ တော်တော့်ကို ပြောနိုင်တာပဲ။ ဒါဆို ကျုပ်လဲ ပြောကြည့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ငွေက ဘယ်လောက်များ ရှိလို့လဲဗျာ။ လူတယောက်အတွက် ဘဝ ရပ်တည်မှု လုပ်လို့ရရဲ့လား။ ဘယ်သူကရော တောင်းနေလို့လဲ။ အဲဒါ ခင်ဗျား ငွေစကားပြောလို့ ကျုပ်ကလဲ ပြန်ပြောတာပဲ။
“ဂဇက်နိုင်ငံသားက ဂဇက်ရဲ့ ချာတာ ဂဇက်ရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေကို လိုက်နာရမယ်။” ရော ခက်ကပြီ။ ကလေးတွေ ငယ်ငယ်က ကစားသလို ကုလားမကြား နားမကြားဆိုပြီး နားပိတ်အော်နေသလိုပဲ။ အခုပဲ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြောနေပြီလေ။ ကျုပ်တို့က လူကို ဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာကိုဝေဖန်တာပါလို့။ စာထဲမှာ ပါတဲ့ အရေးအသားတွေကို ဝေဖန်တာလေ။ ဒီမှာက စာကိုတော့ ဝေဖန်ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့် ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ စာကို ဝေဖန်တာကို ခင်ဗျားဘယ်လိုပြောမလဲ။
ခင်ဗျားတို့သူကြီးကို အဲဒီလို စာထဲမှာရေးရုံနဲ့ သူကြီးရွေးပွဲမှာ အရွေးခံပါလားတွေ ဘာတွေဆိုတာက ကျုပ်ကိစ္စပါဗျာ။ ကျုပ်ကလည်း အရွေးခံမယ်တွေ ဘာတွေ မပြောသေးပါဘူး။ ပြောတာတော့ ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သဘောထားပါ။ ကျုပ်အကောင့်ကို အခုချိန်ထိ ထားပေးတဲ့အတွက်ရော အခုလို သနားတော်မူ တပဲဆိုတဲ့ ငွေဖြူတွေကို ချီးမြှင့်တဲ့အတွက်ရော ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မေတ္တာစေတနာကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ တခြားလူ ဘယ်ဝင်ရွေးလို့ ဖြစ်မလဲဗျာ့။ ခင်ဗျားတို့ချင်းက အပြင်မှာလည်း သိပြီး စည်းလုံးကြတာကိုး။ ခင်ဗျားတို့ချင်း အပြင်မှာ အဆက်အသွယ် ရှိတယ်ဆိုတာလည်း ခင်ဗျားတို့ စာထဲမှာ ပါတတ်တယ်လေ။
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ငွေကြေး အကူအညီတွေအတွက် အလွန့် အလွန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျုပ်ကတော့ မပြင်နိုင်ပေါင် ကိုယ့်ဆရာ။ အဲဒါ တကယ်တော့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ တခုချင်း ပြန်ပြောတာလေ။ အဲဒါပဲ။ ကိုယ်က ပြောတော့ အပြုသဘော သူများပြောတော့ အပျက်သဘော။ အားလုံးက ခင်ဗျားတို့ သတ်မှတ်တဲ့စံလေ။ ကျုပ်ဒီပို့စ်ကို နောက်လာချင်မှ လာတော့မယ်။ ခင်ဗျားကွန်မန့်လည်း ခင်ဗျားပြန်ကြည့်ပါ ကိုယ့်ဆရာ။
ခင်ဗျားလဲ ကျုပ်ကို ထေ့ခဲ့တာပဲလေ။ ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်နော်။ ကြွားရေးလည်း ဝေဖန်လို့ မရဘူး။ နောက်သူရေးတဲ့ စတွေ မဖတ်နဲ့လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ အဲဒါဆို တဘက်ကလည်း ပြောလိမ့်မယ်။ စာရေးတဲ့ နေရာကို လာကတည်းက ဖတ်ဖို့လာတာ။ ဖတ်မယ် မဖတ်ဖူး ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပဲ။ အဝေဖန် မခံနိုင်ရင် မဖတ်စေချင်ရင် ကိုယ်လည်း အစကတည်းက မရေးနဲ့ပေါ့လို့။
ကျုပ်မကောင်းတဲ့ စာတွေကို ခင်ဗျားတချက်ချင်း ချေပနေရင် ခင်ဗျားရဲ့ ဝါဒအရ ခင်ဗျားလဲ မကောင်းတဲ့ စာရင်းထဲ ပါသွားလိမ့်မယ်။ ကျုပ်နာမည် မတပ်လဲ မကောင်းတဲ့ အယူအဆတွေကို တချက်ချင်း လိုက်ရှင်းရင် ခင်ဗျားလဲ မကောင်းဘူး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပုံသေနည်း အရပေါ့။ အဲဒီတော့ ကောင်းတာက ဘာမှလည်း ပြောမနေနဲ့။ ပို့စ်တွေလဲ အသစ်တင်ပြီး ရှင်းမနေနဲ့။ ဖတ်တဲ့လူတွေက ဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်။
ကျုပ်ကတော့ မကောင်းဘူး မကြိုက်ဘူး ထင်ရင် ပြောခွင့်ရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ပုံသေနည်းကို ကျုပ်မသုံးလို့။
Comment ကို ပိုစ့် ပိုင်ရှင် က Strike တာ (ဖြတ်မျဉ်းသားတာ) .. ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးကြီး ဗျ
… အဲ … ဒါ … လေး …..
လည်တည်လည်တည်နှင့် ခပ်တည်တည် ဝင်မန့်ပါမည်
ပွင့်လင်းလွန်းက မကောင်းသလို လျှို့ဝှက်လွန်းကလည်း အဆင်မပြေပါ။
privacy & transparency သည် ဘက်ညီရန်လိုသည်ဟု ထင်ပါ၏
ကြိုက်တယ် ညီ ဝတုတ်လေးရေ…………
လူ့လောကမှာနေ နေကြတော့လဲ လူတွေနဲ့လူ့အကြောင်းမပါတဲ့ စကား စာ ဆိုတာပြောရ ရေးရ ခက်တယ်။
ဒါနဲ့ ဘဲ စကားပြော၊စာရေး “စည်း” ကျော် ရင် စကားများမယ်။ ရန်ဖြစ်မယ်။ နိုင်ငံတွေဆို စစ် ဖြစ်မယ်။
အဲဒီ အကြောင်းတွေ ကို ရေးချင်လို့ အကို ” ABC : A= attitude, B=behavior, C=contradition ” ကိုရေးခဲ့တာ။
အမှန်က အဲဒီ ” ABC ” မှာ နောက်ဆက်တွဲရှိတယ်။(မရေးအားသေးလို့)
“ART ” လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။
အတွဲလိုက်ဆိုရင် ” ABC=ART ” ပေါ့။ အေဘီစီအနုပညာ ပေါ့။
” A=Awareness” “R =Responsibility ” ” T =Transparency ” ပါ။
ဆိုတော့ အဲဒီ တာဝန်ယူမှူတွေ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှူတွေ အပေါ်မှာ
” Awareness = အသိတရား(ကို ကတော့ သတိပြုမိသွား/ သတိထားမိတဲ့ နားလည်မှု လို့ ခေါ်ချင်တယ်)”
က အဓိကနေရာမှာ ရှိတယ်။
ကိုတိမ်မည်း က “Understand ” လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။
ကို က ” Awareness ” လို့ ဆိုချင်တယ်။
(ဒီကော်မန့်မှာတော့ Awareness ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ ချိတ်သွားတာလေးဘဲ ပြောမယ်နော်)
အဲဒါလေးက ညီလေးပြောတဲ့ “လိုင်းနီ ပါးပါးလေး” ကို ဖြတ်တဲ့ နေရာမှာ သိပ်အသုံးဝင်တာပေါ့ကွာ။
ပြန်ကောက်ရရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ ပါစင်နယ် ဆိုတာ တွဲလျက်ဆိုတော့ အားနည်းချက်တွေရော အားသာချက်
အဲဒီမှာ လူ့သဘော လူ့အတ္တက သူများမှားရင် “ပြောချင်” ပြီ။
အဲဒီ ပြောချင်တာကလဲ ( ဥပမာ။ ။အတ္တကြီးသူဆိုရင် )သူများအားနည်းချက် ကိုမှ ပြောချင်တာ။
လူတွေဟာ သိသိသာသာရော၊ မသိမသာပါ မိမိပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးသားရှိတတ်ကြတယ်။
ဦးလှ ဟာလူဆိုး။ ဦးမြဟာ လူကြွား။ ဦးတင် ကတော့ အမူးသမား။ ဆိုတာမျိုး ကိုပိုပြီး (မကောင်းတဲ့ဘက်ကို)
မှတ်ထား၊ “စွဲ” ထားလိုက်ကြတတ်တယ်။
ဒီလူဟာ ထားပါတော့ ကြောင်ဝတုတ်ဟာ “ဘာ” ဆိုတာ ဟိုးစောစောထဲက သူ့စိတ်မှာ “ရီကော့ဒ်”ရှိပြီး
သားဆိုတော့ ပါစင်နယ်၊ထရဲန်ပါရဲန်စီ တွေပါလာတော့”အဲဒီ မှတ်တမ်းက အကွက်တွေ” နဲ့ ဆော် တော့တာကိုး။
အဲဒီမှာ ကွန်ဖလစ်= ပဋိပက္ခဖြစ် တာဘဲ။
ကို ကွန်ဖလစ်သီအိုရီတွေ အများကြီး လိုက်ဖတ်ဘူးတယ်။
နောက်ဆုံး အဲဒီ အပ္ပမာဒေန နဲ့ ဘဲ ဆုံရတော့ ဘုရားဟော တရားက ” awareness ” ကိုဘဲ ပြောခဲ့တာလို့
ကိုယ် ဘာကို “စွဲ” ပြီး ပြောချင်နေတာလဲ ဆိုတာ ကိုယ်ဟာကို မသိနိုင်သေးရင်တော့ “စည်းနီပါးပါးလေး”
ဆိုတာ “လူသားအချင်းချင်း အတူတကွ လက်တွဲ နိုင်ရေး” နဲ့ ဝေးနေအုန်းမှာလို့ ဆိုပါရစေ။
ကို တို့ ဒီမှာ ဆီမီနာ တွေ လုပ်ကြတယ်။ တယောက်အယူအဆကို တယောက် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးကို
ပြောတဲ့ အခါတွေလဲ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးတာမလို့
သူတင်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာ “မှန်” ခဲ့ ရင် အဲဒီလောက် အတိုက်အခံ ကိုခုခံနိုင်တယ်ဆိုပြီး သူ့အမှန်က
ပိုပြီး “တောက်ပြောင်” သွားတယ်။
မှားခဲ့ ရင် အဲဒီအကြောင်းအရာအတွက် “အမှန်” ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်လိုက်လို့ မှားခဲ့သူအတွက် အမြတ်
ငြင်း ကြ ခုန် ကြ တယ်ဆိုပေမဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်က နေသွားတာမလို့ “ပုဂ္ဂိလိက” သဘောမဆောင်တော့
“မြတ်” တယ်။ ဝင်း ဝင်း စိကျူရေးရှင်း။
ကို ထင်တာမမှားရင် ကော်မန့်တွေ (ဆဲတာကလွဲရင်) မဖြတ်မတောက်ဘဲ၊အယ်ဒီတာမစိစစ်ဘဲ တင်ပေးနေတဲ့
သူကြီးရဲ့ စိတ်မှာ အဲဒီလိုဖြစ်စေချင် ပုံဘဲ။
(ပါစင်နယ်တွေ ပါလာရင်တော့ သေချာတာပေါ့၊ ရန်ဖြစ်မှာပါ)
ကို့ အမြင်ပါ ။။
ဖတ်ပြီးတော့မှပဲ လည်ချင်သလိုဖြစ်သွားတယ်..Personal & Professional, Privacy & Transparency (PPPT ပေါ့..)
ဖြုတ်မျက်လုံးဥာဏ်လေးနဲ့ (ည လေးနဲ့ ဥာဏ်တယ်လို့ ဖတ်ပေးပါ).. နားလည်သလောက် ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်…
Personal နဲ့ Professional-
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ အလုပ်နဲ့ကို ရောထွေးလို့ မရပါဘူး… အားလုံးသိကြတဲ့ ဥပမာကိုပြောရရင် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အိမ်မှာအဆင်မပြေဖြစ်လာပါစေ..ယုတ်စွအဆုံး မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဆုံးလို့ ၀မ်းနည်းနေပါစေ..ရိုက်ကွင်းမှာ ဟာသခန်းကို သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ရပါမယ်… ငါဝမ်းနည်းနေလို့ ရိုက်ကွင်းကိုဖျက်ပေးပါလို့ ပြောလို့မရပါဘူး…
ဒီလိုပါပဲ… member တစ်ယောက်ဟာ အခြား member တစ်ယောက်အပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မကျေနပ်ချက်တွေ ရှိနေလင့်ကစား အဲ့ဒီမကျေနပ်ချက်တွေကို အခြေခံပြီး သူရေးတဲ့စာအပေါ်မှာ တိုက်ခိုက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဥပမာ (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ဥပမာပေးတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်).. ဥပမာပေါ့နော်..လုံမ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အပြင်မှာအပေအတေ၊ ဂျပိုးပေါ့..လုံမနဲ့လည်း သိပ်မတည့်ဘူးဆိုပါတော့..ဒါပေမယ့် သူက ရွာထဲမှာ ပို့စ်တင်တော့ ပို့စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ လုံမရဲ့အမြင်နဲ့ ခံယူချက်ကို ဝေဖန်ပြောရုံကလွဲလို့ ချဉ်ချဉ်နဲ့ သူ့ပို့စ်ကို တိုက်ခိုက်တာတို့၊ အပြင်က သူ့အပေါ်မကျေနပ်ချက်တွေကို ၀င်ပြောတာမျိုးတို့ လုပ်လို့မရပါဘူး.. အဲ့ထဲကမှ သူရေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ အရေးအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်မတူတာတွေကို ပေါ်တင်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်…
(စာထဲက လေသံကို ဝေဖန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ စည်းကမ်းချက် ၁၃ မှာ ပြောထားပါတယ်)
ဒီအချက်ကတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှာမှ ကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့ privacy ရယ်..အများကို ချပြလို့ရမယ့် transparency ရယ် ဆိုပြီး ရှိတာပါ…
တစ်ချို့ဆိုရှိပါတယ်…အကောင့် password လိုမျိုးတွေကို privacy အနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်းဇနီး တွေကိုတောင် မပြောဘဲ ထားထားပါတယ်…
ဆိုတော့.. ရွာသူရွာသားအချင်းချင်း ရွာထဲမှာ..တစ်ဆင့်ထပ်ပြီး အပြင်မှာ ခင်ကြမင်ကြတဲ့အခါ ကိုယ်ရဲ့ ချပြလို့ရမယ့် personal တွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြကြပါတယ်..ဘယ်မှာနေတယ်..ဘာအလုပ်အကိုင်လုပ်တယ်… စသဖြင့်ပေါ့… ဒီလို personal တွေကို ပို့စ်ထဲကနေတစ်ဆင့် (လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံတွေကို ရေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်) သိရတာ ရှိသလို အပြင်မှာ မိတ်ဆက်ကြရင်းနဲ့ သိကြတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် ခင်မင်မှုအရ သိထားတဲ့ အချို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို ကာယကံရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ အများသိအောင် ချပြတာမျိုးတွေတော့ လုပ်လို့မရပါဘူး… တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် transparency ဖြစ်နေပေမယ့် အများအတွက် privacy ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလည်း ရှိပါတယ်…
ဆိုတော့ နားလည်သလောက် အနှစ်ချုပ်ရရင်တော့ personal ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းအရာတွေကို professional ဆိုတဲ့ အလုပ်မှာ ရောထွေးလို့မရကြောင်းနဲ့ personal ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ privacy နဲ့ transparency ကို လေးစားလိုက်နာသင့်ကြောင်း ထင်မိပါတယ်လို့…
ကိုဖက်ကပ်ရေ…ထင်တာတွေတော့ မန့်လိုက်ပြီ.. မှားနေတာရှိရင်လည်း ပြောပါဦးနော်..
PPPT ဆိုသည်မှာ တကယ်တမ်းတော့……
တနည်းအားဖြင့် PTPP လို့ မှတ်ယူလို့ ရဂျောင်း………
ဒါကြောင့် PTPP အတွက် သတ်သတ်ဆွေးနွေးသင့်ဂျောင်း အဆိုပြုပါတယ်….
အင်း အခုလုံမလေးမွန်မွန် ပြောသွားတာတွေက ကျုပ်ပြောချင်တာနဲ့ တထပ်တည်းပဲဗျာ။ ကျုပ်လဲ အဲဒီလိုပဲ ပြောမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ကျုပ်နဲ့ လုံးဝကို မသိသလို ကျုပ်ဘက်တော်သားလဲ မဟုတ်ကြောင်းပါ။ သဘောထား တိုက်ဆိုင်တာကို ပြောခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာသော်တာဆွေ တို့ဆို သူ့အကြောင်းကိုရေးတယ်ဗျာ ၊ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းလဲ သူ့တပည့်ဆရာသော်တာဆွေအကြောင်းရော သူ့အကြောင်းရော ရေးတယ်။
ကျွန်တော်လဲ သူ့အကြောင်း ရော ကိုယ့်အကြောင်းရော ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတဲ့အကြောင်းရော ရေးမိတယ် ။
အဲဒါ ဆက်ရေးလို့ရလားဗျာ …….။
ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အကြောင်း… ဆိုးတဲ့အကြောင်း… ပေတဲ့အကြောင်းရေးပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းထဲကဇာတ်ကောင်အဖြစ်တလဲ… အပြင်က ကာယကံရှင်က မကြည်ဖြူဘူးဆိုရင်တော့ ကိုသုဝေ တစ်ခုခုစဉ်းစားရမှပါ…
ဥပမာ… စာရေးဆရာနီကိုရဲရဲ့ မကြည်ပြာနှင့်ပထမနက္ကတစ် ဆိုတဲ့ဝတ္တုကို မရေးခင် မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ အခန်းဆက်ဝတ္တုအဖြစ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်… ကျွန်တော်ပြောလေ့ရှိသလို Base on true story ပေါ့…
ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက နာမည်က မသီတာပါတဲ့… ကာယကံရှင်က ကန့်ကွက်လို့ မကြည်ပြာဖြစ်ခဲ့တာပါ…
အဲဒီတော့ ကိုရဲဝင်းရဲ့ ရည်းစားဟာ ကြည်ပြာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး… သီတာပါကွယ်… (ဒီစာကို မောင်ဂီမမြင်စေရ)…
အဲဒီတော့ ကိုသုဝေရေးသောစာများ… တွေးသောအတွေများသည် လွတ်လပ်စွာရေးခွင့်… တွေးခွင့်ရှိပါသည်… ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွေးနှင့် ကိုယ့်အရေးကို…
ကိုသုဝေ တာဝန်အပြည့်ယူရမည်… တာဝန်အပြည့်ယူရဲရမည်…
အဲဒါဆိုရင် ဒီမိုကျကျ… လူ့အခွင့်အရေးရှိရှိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်…ကိုသုဝေ လျှောက်လှမ်းလို့ရပါပြီ…
ခင်ဗျားပို့စ်ထဲမှာ ဂဇက်မှာ စာရေးတဲ့ အကြောင်းပါလာလို့ ရယ်.နောက်ပီး
ဆြာကိုသစ်မင်းကလည်း အပေါ်က ကွန်မန့်မှာ Awareness = အသိတရား လိုအပ်ပုံကို ပြောသွားတာ မို့..
ကျနော် ဖတ်ဖူးတဲ့စကားလေး တခွန်းနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်.မဆိုင်ဆိုင် ၀င်မန့်လိုက် သဗျ..
ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို စာအုပ်ကို ရေးတဲ့
စာရေးဆြာကြီး Ernest Hemingway ရဲ့စကားလေးတခွန်းပါ..
အကယ်လို့ လူတွေအကြောင်းကို စာရေးတော့မယ်ဆိုရင် မရေးခင်
ကိုယ့်ကို ကိုယ်ယဉ်ကျေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပါတဲ့..
နောက်ပီး ယဉ်ကျေးတဲ့ လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အချက် ၂ချက်နဲ့ ပြည့်စုံရမတဲ့..
အဲ့ ၂ ချက်ကတော့ ရယ်မောလှောင်ပြောင်စိတ်ကင်းတဲ့ ကရုဏာစိတ် နဲ့
လောကဓံရဲ့ အထုအထောင်းဒဏ်စွမ်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ် ဆိုတာပါပဲ..
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်လည်း ဘယ်တော့မှ ပြန်မတုံ့ပြန်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့.
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ပြန်ထူ ထပါ တဲ့…
ဆိုတော့ သူ့ဆိုလိုရင်းကို ကျနော်နားလည်လိုက်တာတော့
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူတိုင်းစာရေးကောင်းသူ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့…
စာရေးကောင်းသူတယောက်အဖို့တော့ ယဉ်ကျေးတဲ့လူဖြစ်ဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲ…
ဒီတော့ကာ..ယဉ်ကျေးတဲ့ စာရေးသူတယောက်အနေနဲ့ သူတပါးကို အလွယ်တကူ အပုပ်မချ.မလှောင်ပြောင်.မထိုးနှက်.မတိုက်ခိုက်ဘဲကိုယ်ပေးချင်တဲ့
အကြောင်းအရာသက်သက်ကို ဘာစည်း ဘာဘောင်မှ မကျော်ဘဲ ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုရင်
ဒီရွာမှာပြောတတ်.ပြောနေလေ့ရှိတဲ့.. Awareness = အသိတရား ဆိုတာကြီးကို
ကိုယ်စီတိုင်း အဖော်ပြုဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့တော့ မြင်တာပဲ..
ဆိုးတော့ မဆိုးဘူးဗျ ကိုအမတ်ရ
ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုဆို Stire သမားတွေ ဘယ်နားသွားနေရမတုန်း
Green Rose says: `အဒေါ်ကြီး.. မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ၊ ငါးဖယ်နဲ့´
မုန့်ဟင်းခါးရောင်းသူ says: `ငါးဖယ်ကြော် ကုန်သွားပြီ၊ ဘာနဲ့စားမလဲ´
Green Rose says: `ဟင်.. ဒီနေ့ ဟိုဘက်ဆိုင်မှာလည်း ကုန်၊ ဒီဖက်ဆိုင်မှာလည်း ကုန်ပါလား´ ပဲကြော်နဲ့ပဲပေးတော့
မုန့်ဟင်းခါးရောင်းသူ says: `သြော်.. ညည်းက ဟိုဖက်ဆိုင်မှာမရလို့ ငါ့ဆိုင်ကိုလာတာပေါ့.. ဟုတ်လား´ Green Rose says: ဟုတ်ကဲ့
မုန့်ဟင်းခါးရောင်းသူ says: :chee:
MD says: `Green Rose, မနက်ဖြန် အစည်းအဝေး မနက် ၉ နာရီမှာစမယ်နော်.. လိုအပ်တာတွေပြင်ထား´
Green Rose says: ` Green Rose မနက်ဖြန် ရုံးမလာနိုင်ပါဘူး´
MD says: `ဘာဖြစ်လို့လဲ´
Green Rose says: ` ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ ´
MD says: `ဘာကိစ္စလဲ´
Green Rose says: ` ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စလေးပါ ´
MD says: :chee:
ခုအချိန်ထိ Green Rose တို့က သူများရဲ့ transparency ရှိမှု၊ ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ရှိမှု ကိုပဲ လိုချင်နေကြတာပါ။ ကိုယ်က transparency ရှိပြီး သူများရဲ့ Privacy ကိုလေးစားဖို့ လေ့ကျင့်ယူရပါဦးမယ်။
အဲကျုပ်အကြောင်းကျုပ်လဲဝင်ပါချင်ဘီ။ကော်မန့်ကောင်းလေးတွေစောင့်ဖတ်နေချင်လို့ ချက်ချင်းမဝင်ပဲနေရတာပါ။လူအုပ်စုတောင့်တာတွေများတာတွေထက် ကျုပ်မြင်တာ၊မှန်တယ်ထင်တာပြောဆိုချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမေးချင်တာက ကိုစံလှကြီးကော်မန့်ထဲမှာ ဘာမှရိုင်းတာတစ်ခုမှပါတယ်မထင်မိဘူး ကိုဖက်တီးကတ်ရေ။ဘာကြောင့်ဖျက်ရပါသလဲ။ ဒီမိုသာအော်နေတယ် ဒီကော်မန့်လေးတောင် မခံစားနှိုင်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။အခုချိန်ထိ သဂျီးဝင်မပါသေးပါဘူး။သို့သော် အတော်အလေးထားပြီးဒီပို(စ့်)ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်နေတာ သေချာပါတယ်။ကိုစံလှကြီးမေးသွားတာတွေက အမှန်တွေပါ။ကျွန်တော် ပိုက်ဆံရဖို့အတွက်ဒီစာကိုလက်ညောင်းခံရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလူတွေခံစားရအောင်
တောင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျကြောင်းကျွန်တော့ကို သဂျီးကရှင်းပြပါသေးတယ်ခင်ဗျ။သို့သော် အပြောင်အပျက်လိုလိုနဲ့ စလိုက်မိတာလဲပါပါတယ်။ကို တိမ်မည်းကိုလဲ ထောက်ခံပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဟာစာရေးဆရာများမဟုတ်တဲ့အတွက် professional လို့မခံယူပါဘူး။ကိုယ့်အမြင်ကို ကိုယ်ရေးနေကြတာပါကိုကြောင်ဝတုတ်။ရွာထဲမှာပျော်ပြီးကော်မန့်တွေရေးနေတာလဲချစ်လို့ပါ။သဘောမကျရင် အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်(တစ်ကယ်ကုန်တာကကျုပ်တို့ပါဗျ)၊မျက်စိညောင်း၊လက်ညောင်းခံပြီး မဝင်တာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားပေးပါ။သဂျီးကျုပ်ကိုပေးတဲ့ငွေ(ခင်ဗျားတို့အပြောပေါ့လေ)၈၀၀၀နားကပ်နေပြီ။ဘယ်လိုများထုတ်ရပါမလဲနော်။သို့သော် ကျုပ်သုံးခဲ့တဲ့အင်တာနက်ဖိုးကရော ဘယ်လောက်လဲမသိ။အဲဒါကို professionalလို့ လိုရာဆွဲပြောချင်ရင်တော့ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဗျ။ကျုပ်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အဲဒီမျဉ်းလေးကို ခပ်ပါးပါးလေးလဲ ခလုတ်တိုက်မိတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ ခံစားလာရတာထက် စော်ကားတယ်ယူဆရင် ကျုပ်ကရှင်းရှင်းပဲပြောချင်တာက တစ်ကြောင်း ခပ်သာသာလေးထပ်တွယ်ချင်တဲ့ ကျုပ်စိတ်အရကိုဖြစ်လာတာပါပဲ။သို့သော် ပို့(စ်)နဲ့မဆိုင်တာတော့ မပြောချင်လို့ကိုမပြောခဲ့တာတွေလဲရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ပြောတာတော်တော်
များများကတင်ထားသူရဲ့ပို(စ့်)ပါအကြောင်းကိုဝင်ပြောတာများပါတယ်။ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းစော်ကားထားရင်တော့ပြန်ရိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနှိပ်ကွပ်တယ်ထင်ရင်တော့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြန်ဗျင်းတယ်
ပေါ့ဗျာ။အဲဒါကလဲ စည်းကမ်းချက် (10. မိမိတင်သည့်စာကို စာမူရှင်(တင်သူ)မှ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အယ်ဒီတာ၊ အဒ်မင်တို့မှ တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။) အရသူပဲတာဝန်ယူရမှာမို့ သူ့ကိုပဲရှင်းတာပါ။အခုတော့ တစ်မျိုးပဲ ဝိုင်းရှင်းပေးနေသလို စိတ်ထဲခံစားနေရတယ်။ထပ်လာပါဦးမယ်။ထပ်စောင့်ဖတ်ပါဦးမယ်။ ထပ်ရှင်းချင်ရှင်းပါမယ်။
မရှင်းချင်လဲမရှင်းတော့ပါဘူး။ မဝင်ချင်လဲမဝင်လာတော့ဘူး။မျက်စိညောင်းတယ်ထင်ရင်လဲ မဖတ်တော့ပါဘူး။ဒါက ကျုပ်ရဲ့  Privacy ပါပဲ။ကဲနောက်ဆုံးကျုပ် Personal လေးကြည့်ပေါ့ဗျာ။။။။
အားလုံးကိုခင်တဲ့ ဆိုက္ကားသမား မောင်မိုးတိမ်……..
အခုချိန်ထိ သဂျီးဝင်မပါသေးပါဘူး။သို့သော် အတော်အလေးထားပြီးဒီပို(စ့်)ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်နေတာ သေချာပါတယ်။
၀င်ပြောရကောင်းမလား.. မကောင်းလား.. တွေးနေတာ..
ရွာထဲက.. သူ့ခြံဝင်းပဲ… သူပိုင်သပေါ့… :harr:
အိုဘယ့် ဒီမိုသူကြီးရယ် နည်းနည်းလောက်တော့ပြောခွင့်ပြုပါရှင်
တခြားတော့ မသိဘူး မျဉ်းသားထားတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မပြောရရင် မနေနိုင်တော့လို့ပါ။
ဒီလိုပြောလိုက်လို့ လူသောက်မြင်ကပ်ခံရရုံမက ရှေ့လျှောက်ရွာမှာပါ အနေကျုံ့ ၀ိုင်းပြီးပြင်းခံရတော့မယ် ငေါ့ကြတော့မယ် စောင့်ကြည့်ခံရတော့မယ် ကြုံတိုင်း အထေ့ခံရတော့မယ် ဆိုတာသိသိကြီးနဲ့ ပြောပါရစေတော့ ပြောချင်လွန်းလို့ပါ
်မသကာ ကျမကွန်းမန့်ပါ အတားခံရရုံပေါ့ ဟီး
တချို့တွေ လစ်ဘရယ်အရေခြုံ ဒီမိုဆိုပြီး သံကောင်းဟစ်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ပြောသလို ကိုယ်တကယ် လက်ခံကျင့်သုံးရဲ့လား အပြောနဲ့ အလုပ်ညီရဲ့လား ဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်ရသလိုပါပဲ
ဒီမို သူကြီး ပြောပြောနေတဲ့ စနစ်ကြောင့်မဟုတ် လူကြောင့်ဆိုတာ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပါတယ်လို့
လုပ်ပိုင်ခွင့် အလွဲသုံးတတ်တာ နေရာမြင့်မှ မဟုတ် ဒီလိုရွာမှာတောင် တွေ့နေရတော့ တို့တွေ မတိုးတက်တာ ဘာဆန်းသလဲလို့ နော့် ….
ရွာသက်လေး ရှိလာတော့ လူက လည်း အရေထူလာတယ် စိမ်းစိမ်းကျက်ကျက် လမ်းကြောင်းပေါ်က သွေဖယ်လာတယ်ထင်ရင် အမုန်းခံဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး
သံခမောက်ဆောင်းထားပါတယ်၊ အခန့်မသင့်ရင် အားလုံးရဲ့ အမုန်းကို ခံယူရမှာဆိုတာလည်း ကြိုတွေးပြီးသားပါ ။
လူကိုခင်ပါတယ် မူကိုတော့ မပြင်ချင်ပါဘူး
လွန်တာရှိ ၀န္ဒါမိပါ ရှင့်
ဆွဲဆောင်မှု လုံးဝလုံးဝမရှိသူ အပိုကြီး
ဒီနေရာတော့ သူကြီးကို ဆွဲမထည့်ပါနဲ့အုံးဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဘာမှ ဝင်မပြောသေးဘူး။ တဘက် ဆောင်းပါးရှင်ကလည်း ဒီစာရေးသူတွေကို အခကြေးငွေ ပေးပြီးသားဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ သူကြီးပြောတာလို့ မပြောပါဘူး။ ဒါကြောင့် စာရေးသူတွေကို ကျုပ်တို့က အခကြေးငွေ ပေးပြီးသားဆိုတဲ့ သဘောထားဟာ ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ အာဘော်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ ဒီစကားကို သူကြီးပြောရင်တော့ ခုနပြောတဲ့ စကားတွေဟာ သူ့ကိုဝေဖန်ရမှာပါ။ အခုတော့ တရားမျှတမှု ရှုထောင့်အရ ဘာမှဝင်မပါသူကို ဆွဲခေါ်လို့ မရဘူး။
တချက် သိသာအောင် ထပ်ပြောချင်တာက ကျုပ်က ပေးတဲ့ပွိုင့်တွေ နည်းတယ် များတယ် ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် လုံးဝ ဒီကိစ္စကို စပြီး မပြောခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ။ ဒါက ကျနော့်အမြင်အရတော့ အချင်းချင်း အပျော်သဘောနဲ့ ထုံးတို့စတမ်း စစ်တုရင်ထိုးတဲ့ သဘောလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ဆောင်းပါးထဲထည့်ပြီး ဂေဇက်မှာ ငွေရပေါက်ရလမ်း ဖန်တီးပေးထားတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို ပို့စ်တခုအတွက် ကွန်မန့်တခုအတွက် အခကြေးငွေပေးထားသည် ဆိုတာမျိုး ပြောလို့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ ဖြစ်ပုံက ငယ်ငယ်တုန်းက မိုနိုပိုလီ ကစားနည်းမှာ ပိုက်ဆံအတုလေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ကစားတာကို တကယ်လို့ ထင်နေတာနဲ့ တူနေတယ်။
နောက်တခုက ကျနော် ပြောသလို အလှူလုပ်မယ်ဆိုပြီး ဖိတ်လို့ လူမှုရေးအရဖြစ်စေ လမ်းကြုံလို့ဖြစ်စေ တကယ်ကို စားချင်လို့ဖြစ်စေ လာစားတဲ့ လူတွေကို စားပြီးကာမှ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်ကျွေးတာကို စားလို့ ကျုပ်ကို အလုပ်လုပ်ပေးရမယ် လို့ပြောသလို ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒါကို ကျနော်က ချက်ချင်းကြီး ဒဲ့မထောက်ပြလို့ ဆောင်းပါးရှင် စာစီတာ မှားနေတဲ့ သဘောမျိုးပြောပြီး သတိပေးပါတယ်။ အဲဒီမှာလဲ အဲဒီလိုပြောရင် တဘက်က counter ပြန်လာနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကိုပါ ထည့်ပြောပါသေးတယ်။ မရပ်ပဲ အဲဒီအတိုင်းပဲလို့ ရှေ့တိုးလာလို့ ထောက်ပြလိုက်တာပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆိုတာက ထိုက်တန်တဲ့ အခကြေးငွေ တခုကို သူတို့ကိုယ်တိုင် တောင်းဆိုပြီး ကျေနပ်မှ အလုပ်လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှ မိုနိုပိုလီ ကစားနည်းက ပိုက်ဆံတွေနဲ့ မကစားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူ အနေနဲ့တော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်စေ အပျော်တမ်းဖြစ်စေ စာဖတ်သူက သဘောထား မှတ်ချက် ဝေဖန်တာကို လက်ခံရဖို့ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ခိုင်နေရင် ပြန်ဖြည်လိုက် မခိုင်ရင်တော့ လက်ခံလိုက်ပေါ့။
အခု ကျုပ်ပြောတာတွေက ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ ဆောင်းပါးပါ အရေးအသားနဲ့ အာဘော်များကို ဝေဖန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး လုံးဝ ပါစင်နယ် မဟုတ်ကြောင်း သိစေအပ်ပါတယ်။
အခု ပြောချင်တာကတော့ အခုလို လစ်ဘရယ် ဒီမိုသမား ကိုကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ ပို့စ်မှာ ဆင်ဆာမရှိပဲ ပြောခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ ခုနတုန်းက မျက်စိလျှမ်းသွားလို့ ကိုအမတ်မင်းရဲ့ ကွန်မန့်ကို ကျော်ပြီးဖတ်လိုက်မိလို့ နည်းနည်းလေး ကျနော့်သဘောထား ပေးချင်လို့ပါ။ ဒါကတော့ အတည်မန့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအမတ်မင်းကလည်း ကျနော့်ပို့စ်တွေကို အခါအားလျော်စွာ လာလေ့ရှိသူမို့ပါ။ ကိုအမတ်မင်း ပြောတာ မှန်တော့ မှန်ပါတယ်။ သူ့ကွန်မန့်က ဒီလိုပါ။
“အကယ်လို့ လူတွေအကြောင်းကို စာရေးတော့မယ်ဆိုရင် မရေးခင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယာဉ်ကျေးတဲ့ လူတယောက်ဖြစ်အောင် အရင်လုပ်ပါတဲ့။ ယာဉ်ကျေးတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်ဖို့က ရယ်မောလှောင်ပြောင်လိုစိတ် ကင်းတဲ့ ဂရုဏာစိတ်နဲ့ လောကဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိရမယ် ဆိုတာပါပဲ” လို့ဆိုပါတယ်။ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီအတိုင် ကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ရာနှုန်းပြည့်ဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခနဲ့ဟာသလို့ ခေါ်တဲ့ satire ကိုအားသန်သူတွေ ရှိလို့ပါပဲ။ လောကဒဏ် အကြောင်းတော့ စာရေးတာနဲ့ တိုက်ရိုင်မဆိုင်လို့ မပြောတော့ပါဘူး။
ကျနော့် အမြင်ကတော့ ဒီလိုပါ။ ခနဲ့ဟာသကို မရေးရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ မဖြစ်နိုင်လို့ ရေးရင်တော့ လူတွေအကြောင်းကို ရေးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ကို ဟာသလုပ်လို့ မရပါဘူး။ အလွန်ရိုင်းရာ ရောက်တယ်လို့ ထင်သလို ရက်စက်ရာလည်း ကျတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကာယကံရှင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိလို့ လက်ခံထားရတာမျိုးကို ခနဲ့ဟာသလုပ်ရင် သိပ်ပြီး ရက်စက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဥပမာ အရပ်ပုတဲ့လူကို ဟေ့ ဂျပုလေး လူပုစိတ်တို ခွေးပုရန်လို ဆိုတာမျိုး ပြောမယ် ရေးမယ်ဆိုရင် ကာယကံရှင်နဲ့ ရင်းနှီးရင်တောင် ရက်စက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိတော့လို့ပါ။
နောက်ပြီး မျက်စိစွေစောင်းနေသူကို ဟေ့ အစွေအစောင်း စိတ်ကောင်းမရှိဆိုတာမျိုး ရေးရင်လည်း သိပ်ပြီး ရက်စက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိလို့ပါ။ ထို့အတူ ဆင်းရဲတာလည်း ထိုနည်းလည်ကောင်းပါပဲ။ ခနဲ့ဟာသ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ သဘောတရား အရတော့ ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိပေမယ့် အဲဒါက ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ မသေချာလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် လူတယောက်ကို ခနဲ့ဟာသရေးရင် သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အပြုအမူ မကောင်းတဲ့စရိုက်ကိုတော့ ရေးနိုင်ကြောင်းပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့ ပြင်မယ်ဆိုရင် ပြင်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေး ရှိလို့ပါ။ ဥပမာ အယ်ဒီတာတယောက်က သူဘယ်လို ချမ်းသာကြောင်း သူ့ဇနီးချောကြောင်း သူနေတဲ့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီအပြည့် ရှိကြောင်း ကြွားနေရင် သူရဲ့ ကြွားတတ်ပုံကို ခနဲ့ဟာသလုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မဟုတ်ရင် သူ့အနေနဲ့ ချေပနိုင်သလို မှန်နေရင်လည်း သူပြင်ဆင်ချင်ရင် ပြင်နိုင်ခွင့် ရှိလို့ပါ။ မရေးရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလို ရေးနိုင်တယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။
အယ်ဒီတာလို့ ဥပမာပေးတာသာ ဖြစ်ပြီး မည်သူ့ကိုမျှ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ကြောင်း မန်းဂေဇက် အယ်ဒီတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါကြောင်း လုံးဝ လုံးဝ အသိပေးအပ်ပါတယ်။
အခုလို အများကြီး ပြောခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အခု ကော်မန့်တွေဖတ်ရင်းနဲ့ အဓိကပြသနာကိုတွေ့ပါပြီ…
ကျွန်တော့ဆိုလိုရင်းကို တခြားသူနားလည်လား မလည်လားမသိဘဲစွတ်ပြောမိတယ်ဆိုပါစို့…
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ဘ၀ နှစ်ခုကိုခွဲထုတ်ပြောဖို့လိုလာပြီလို့ထင်ပါတယ်… နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်စိတ်လောတယ်လို့လဲမြင်ပါတယ်…
ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ဘ၀… ကျွန်တော် ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတယ်… ဘယ်မြို့မှာနေတယ်… ဘယ်ငွေကြေးသုံးတယ်…
ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်… တနည်းအားဖြင့်… Real Life…
အွန်လိုင်းပေါ်ကဘ၀… အွန်လိုင်းဆိုတဲ့ဂြိုဟ်တစ်ခုပေါ်က ဂဇက်နိုင်ငံတော်မှာနေပြီး… ပွိုင့်ဆိုသောငွေကြေးကိုသုံးတယ်…
စားရေးခြင်းဆိုသော အလုပ်ကိုလုပ်တယ်… တနည်းအားဖြင့်… Virtual Life….
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောနေသော… Professional ဆိုသောအကြောင်းအရာသည်… Virtual Life ရဲ့ Professional ကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်လို့ပြောရမှာပါ…
အခုဆိုလိုရင်းလွဲသွားတဲ့ Professional အကြောင်းကိုသေချာပြန်စီစစ်တော့ အကုန်လုံးမြင်နေကြတာက တကယ့် Real Life က Professional မဟုတ်လို့… ဂဇက်မှာစာရေးခြင်းကို Professional လို့မထင်ပေမယ့်… Virtual Life မှာတော့ ဂဇက်စာရေးခြင်းဟာ… Professional ပါဘဲ…
Real Life & Virtual Life….
Real Professional & Virtual Professional
ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက ဘ၀နှစ်ခု… နာမည်နှစ်ခု… လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်…
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေသော Virtual Professional ဂဇက်မှစာရေးဆရာတစ်ယောက်ဘ၀ကို အပြင်က ဘ၀တစ်ခုနဲ့ ရောလိုက်တော့ရှင်းရခက်သွားတယ်…
ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို သပ်သပ်ရှင်းပါရစေနော်…
အဲဒီမှာ ကိုစံလှကြီးပြောတဲ့ ကြေးစားဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဒီလိုရှိတယ်ဗျ… US မှာပေးတဲ့လစာ Standard နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုချင်လို့မရသလို…
Virtual Life က လစာ Standard ကို Real Life က စံနှုန်းနဲ့ မဖြတ်ပါနဲ့… အဲလိုဆို ကျွန်တော့်ဆိုလိုရင်းကို ရှင်းပြီထင်ပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ… ဒီငွေ (၂)ကျပ်ကိုမက်လို့စာရေးတာလို့အပြောခံရတယ်ဆိုပြီး ခံစားရသူတွေအတွက် ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်…
ကျွန်တော့် မသေသပ်မှုပါ… ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ချမပြမိတာပါ…
ကျွန်တော်က ကျွန်တော်နားလည်သလို အခြားသူများလဲ နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိတဲ့အမှားပေါ…
အဓိကပြသနာက Exchange Rate က ၁ကျပ် = ၁ပွိုင့်ဖြစ်နေတာကိုး… ၁ပွိုင့်=၂၀၀၀ ကျပ်လောက်ဆိုရင် မဆိုးဘူးလားလို့…
ခင်ဗျားပြောတာ မှားနေတယ်။ ကျုပ်က ပိုက်ဆံနည်းတယ် များတယ် တခွန်းမှ မပြောဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို စကို မစဘူး။ ခင်ဗျားပြောလို့ လိုက်ပြောတာ။ ခင်ဗျားက စပြီးပြောလို့။ တကယ်ပြောချင်တာက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးရင် ဝေဖန်တာခံနိုင်ရမယ် ပြောတာ။ ခင်ဗျားပြောတာတော့ ကျုပ်ပြန်ရှင်းထားတယ်။
ဒီလိုဗျာ… ကျွန်တော်ခံယူချက်တစ်ခုအကြောင်းကို အရင်းဆုံးပြောပါ့မယ်…
အဲဒါကတော့ ပြောရရင် Credit ပေးတာပါ…
ရွာထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ခင်မင်ရင်းစွဲနဲ့ စာရေးတဲ့စတိုင်တွေအပေါ်မှာ ခရက်ဒစ်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်…
ဥပမာပြောရရင်… ကျုပ်လက်ပကျွတ်လေးပျက်သွားလို့ စိတ်ထိခယက်နေသည်…. ဆိုကျွန်တော်ရေးတယ်… ဘေးမှာ ကွင်းစကွင်းပိတ်လေးနဲ့ (ခွက်ဒစ်တူ=အင်ဇာဂီ)ဆိုပြီးရေးတဲ့ပုံစံနဲ့…
အင်ဇာဂီရေးထားတဲ့ ဘယ်ပိုစ့်မှာတော့ဆိုပြီးအစချီတဲ့ပုံစံဟာ အတော်လေးကွဲပြားမှုရှိပါတယ်…
အပေါ်ကအသုံးအနှုန်းလေးက သူ့စကားတစ်ခွန်း… ဒါမှမဟုတ် သူ့စာလုံးပေါင်းလေးက သဘောကျစရာကောင်းလို့… နှစ်သက်စရာကောင်းလို့ တီထွင်သူကို ခရက်ဒစ်ပေးတာပါ…
နောက်တစ်မျိုးကတော့ သူရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်တစ်ခုအပေါ်မှာ ဝေဖန်လိုလို့ဖြစ်စေ… ဒါမှမဟုတ်… အဲဒီပိုစ့်တစ်ခုကို ကိုးကားလို၍ဖြစ်စေ
အဲဒီတော့ ကိုစံလှကြီးရဲ့ စည်းကမ်းချက်အမှတ်(၁၃)မှာ ကျွန်တော့်နာမည်ကြီးတပ်ပြီး ကျွန်တော့်ပိုစ့်ကို ကိုးကားတယ်ပြောရမှာထက်… ကျွန်တော့ပိုစ့်ကိုကိုင်ပြီး ဂဇက်စည်းကမ်းကို ဝေဖန်တာပါ…
အဲဒီစာကိုရေးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက အခြေအနေနဲ့ အခုအခြေအနေမတူပါဘူး…
အဲဒီလိုဘဲ… အကျိုးအကြောင်းကလဲ အတင်းစွဲစိထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်…
ကျွန်တော် ကိုစံလှကြီးစာတွေကို ဖတ်ပါတယ်… ဒါပေမယ့်ကော်မန့်ပေးခဲပါတယ်…
ကိုစံလှကြီးရဲ့ ရှေးရိုးစွဲပိုစ့်မှာ ဒီလိုလေးကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတယ်…
သရော်စာကို သရော်စာလို့ ခံစားဖတ်သွားပါကြောင်းနော်…
သူကိုယ်တိုင် သရော်စာရေးတယ်လို့ ၀င်ခံထားတယ်…
အဲဒီအတွက် သရော်စာလို့ ကျွန်တော်ခံစားသွားတယ်… ဒါပေမယ့် အဲဒါသရော်စာမဟုတ်ပါဘူး…
ခင်ဗျား ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ရေးတာလဲ ကျနော် အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေးတဲ့လေသံ ရှိသေးတယ် မိတ်ဆွေကြီးရေ။
အဲဒီရေးတဲ့လေသံကို ကျွန်တော်အဲဒီကတည်းက အသေအချာဖမ်းမိပါတယ်…
နောက်ဆုံး စည်းကမ်းချက်အမှတ် (၁၃) လဲရောက်တော့…
ပုဂ္ဂိုဟ်ရေးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ… တကယ်တော့ စာပေဝေဖန်ရေးဆိုတာ စာရေးသားပုံရေးသားနည်း…
စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနဲ့ အထားအသိုကိုဝေဖန်တာပါ… အကြောင်းအရာရဲ့ယုတ္တိတန်ခြင်း… မတန်ခြင်းကိုဝေဖန်တာပါ…
“ကျုပ်စိုင်းကွမ်းခေးဟာ မြန်မာပြည်က elite ဆိုတဲ့ အခွင့်ထူးခံ မိဘနှစ်ပါးမှ ပေါက်ဖွားခဲ့သူပါကွယ်။ ကျုပ်မိဘတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ လူ့မလိုင်တွေပါ။ ကျုပ်တို့ ညီအကို မောင်နှမတွေဟာလဲ ဆရာဝန်တွေ အင်ဂျင်နီယာတွေ လေယာဉ်ကတ်ပီတန်တွေ မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မချမ်းသာသူတွေဟာ ကျုပ်တို့လို မကြိုးစားခဲ့လို့ပါ။ ဒီတော့ တွေးတောကြစေလိုပါတယ်ကွယ် ဌဲလျောင်း ဌဲလျောင်း” အဲဒီလို ရေးလိုက်တာနဲ့ ဖတ်သူက ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ထားကို နားလည်သွားပြီဗျ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားကို ဟား ဟား ငကြွားကြီးလို့ ဝေဖန်ရင် အဲဒီလူက ကျုပ်အမြင်အရ ပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သူက ခင်ဗျားရေးတဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ခင်ဗျားကို ဝေဖန်နေတာ။
အချက်ကတော့ ကျုပ်သတိထားမိတာ ကြာပါပြီ။ ကျုပ်မိတ်တွေ တယောက်ကတော့ အဲဒီလို အုပ်စုဖွဲ့တာ မရှိဘူးဆိုပေမယ့် (ကွန်မန့်နဲ့ ပြောတာပါ) ကျနော်လုံးဝ မယုံပါဘူး။ ဒီကိစ္စက သေသေချာချာ ရှိနေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက ခင်ဗျားလဲ တတ်နိုင်ရင် မန်းဂေဇက်ထဲက လူတွေကို မွေးနေ့ဖိတ်ကျွေးတာတို့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို စပွန်ဆာလုပ်ပြီး ဟော်တယ်မှာ လိုက်ကျွေးတာတို့ လုပ်ကြည့်ပါလား။ လူဆိုတာ အပိုင်းလေးကို ပိုင်မှဗျ။ အပိုင်းလေးဆိုတာ အပေးလိုင်းပေါ့ဗျာ။ ဒါလဲ ကျုပ်အကြံပေးတာနော်။
စာပေဝေဖန်မှုကို မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နေပြီ… မျဉ်းအနီလေးကို အဲဒီမှာစဖြတ်ထားခဲ့ပါပြီ…
ဂဇက်မှာ မျက်နှာပြပြီးတွေ့ဆုံဖြစ်ကြသောသူအားလုံးကို စော်ကားသလိုဖြစ်နေပြီ…
တကယ်တော့ စည်းကမ်းချက်တွေကို သရေကြိုးလိုအလျော့အတင်းလုပ်ပြီး လက်တစ်လုံးကြားလှည့်ပတ်ငြင်းနေခဲ့တာ…
ကိုစံလှကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ… ရွာသား FR ကြီးကို ဦးတည်ပြောချင်ရာကနေ… စည်းကမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြောလိုက်… စာပေဝေဖန်ရေး ဘက်ကိုလှည့်ပြောလိုက်နဲ့ လက်တစ်လုံးကြားလုပ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ချင်ပါတယ်…
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ စကားအတိုင်း စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ဒီမှာ စာလာရေးနေတဲ့ လူတွေက စရေးကတည်းက ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှလို့ တောင်းလို့လား။ ခင်ဗျားတို့ဘာသာ သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်နှစ်ကျပ် ဘာညာနဲ့ ပေးတာမဟုတ်လား။ မန်ဘာဝင်ရင် ပွိုင့်ဘယ်လောက် ဆိုတာလဲ သူတို့က တောင်းတာလား။ ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ စည်းကမ်းလုပ်ပြီး ပေးထားတာ မဟုတ်လား။ အဲဒီလို ပြောကြေးဆို ခင်ဗျားတို့ပိုက်ဆံကရော ဘယ်လောက်များ များနေလို့လဲ။ သုံးလို့ရော ရရဲ့လား။ စိတ်မဆိုးနဲ့ ဒီစကားတွေက ခင်ဗျားတို့ အရင်စပြောတာ။
ခင်ဗျားတို့ လုပ်ပုံက ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အလှူလုပ်တယ်ဆိုပြီး ထမင်းဖိတ်ကျွေးပြီးမှ လာချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် လူမှုရေးအရဖြစ်ဖြစ် စားမိတဲ့လူတွေကို ငါ့ထမင်းစားတော့ ငါ့အလုပ်လုပ်ပေးစမ်းလို့ ပြောသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဟိုတလောက ဦးခင်ရွှေ ပြောသလို သတင်းသမားတွေကို ဖိတ်ပြီး ရှင်းလင်းပွဲလိုလုပ်ပြီး ချကျွေးတာကို လူမှုရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့မှာတွေ့လို့ဖြစ်ဖြစ် စားမိတဲ့ သတင်းသမားတွေကို ပေးတာ ကျွေးတာစားပြီး ရေးချင်ရာ ရေးတဲ့လူတွေလို့ ပြောသလို ဖြစ်နေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ကျေးဇူးကြီးပါပေ့ဗျာ။ ကျေးဇူးတော် အနန္တပါပဲ။
အဲဒီစာအထက်မှာ Professional အပေါ် ကြေးစားဆိုတဲ့ကိစ္စ ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး… တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ ကြေးစားလို့သုံးမရဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်… စာလုံးတစ်လုံးအပေါ်အယူအဆအများကြီးကွဲနိုင်ပါတယ်…
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းကို ဒီအတိုင်းထားပေးခဲ့ပြီး…
လက်ခံလို့မရတဲ့အပိုင်းကို ခြစ်ခဲ့တာပါ… မခံနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး… သိစေချင်လို့ပါ…
ပြောရရင်တော့ ဂဇက်မှာ တစ်ရက်ထည်းအတူတူ Member ၀င်ပြီဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းဂဇက်ပေးတဲ့ပွိုင့်ကို လူတိုင်းညီမျှစွာရမယ်…
အဲဒီလိုပဲ… ပိုစ့်ရေးရင်ဖြစ်စေ…. ကော်မန့်ရေးရင်ဖြစ်စေ… တူညီတဲ့ပွိုင့်ရမယ်…
ဂဇက်ကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့မြင်ကြည့်ကြပါ… အဲဒီလိုမြင်စေချင်လို့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကော်မန့်ထဲမှာ ဂဇက်နိုင်ငံတော်လို့သုံးပါတယ်…
ကိုစံလှကြီးအနေနဲ့ ဂဇက်မှာ အကောင့်လုပ်စာဝင်ရေးပြီဆိုတာနဲ့ ဂဇက်ပေးတဲ့ပွိုင့်ကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ…
မလိုချင်သည်ဖြစ်စေ… ရနေမှာပါ… အားလုံးတန်တူညီမျှပါပဲ…
ဂဇက်မှာနေရင် ဂဇက်ရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာရပါမယ်… ဥပဒေမရှိဘဲ ဒီမိုကရေစီမရှိပါဘူး…
လုပ်ချင်တာလုပ်… ပြောချင်ရာပြော… စည်းမရှိဘောင်မရှိက ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူး…
ဒီမိုလို့ဆိုတာမို့ ဥပဒေကို အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာနဲ့ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်…
ဒါပေမယ့် ဥပဒေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခွင့်မရှိဘူး…
နောက်တစ်ခုက ဒီဥပဒေကကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး… အဲဒီလိုဘဲ ဒီဥပဒေကိုလူအများက လက်ခံထားပြီးကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပြင်ချင်သူဖြစ်နေရင်…
ခင်ဗျားတို့ချင်းက အပြင်မှာလည်း သိပြီး စည်းလုံးကြတာကိုး။ ခင်ဗျားတို့ချင်း အပြင်မှာ အဆက်အသွယ် ရှိတယ်ဆိုတာလည်း ခင်ဗျားတို့ စာထဲမှာ ပါတတ်တယ်လေ။
ဒီစာလေးကိုလဲ မြင်စေချင်ပါတယ်… ခြစ်လိုက်လို့များ လူတွေမမြင်တော့ဘူးထင့်…
ကိုစံလှကြီးရေ… ဒီစာလေးကိုတော့ ဂဇက်မှာမျက်နှာပြထားပြီး လူမှုရေးနဲ့ ဂဇက်အတွက်ကောင်းရာလေးတွေစဉ်းစား
ကိုစံလှကြီးအနေနဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်တာထက်… အပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးတာထက်…
ဂဇက်စည်းကမ်းအပေါ်ပုဂ္ဂိလိကအမြင်… ခံစားချက်… မကျေနပ်ချက်များစွာနဲ့ ရေးသားတယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်… ဒီကော်မန့်ကို ပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးစေလိုလို့ ခြစ်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်လိုမမြင်ကြတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး…
ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပိုစ့်… ကျွန်တော့်ခြံဝန်းထဲမှာ ကိုစံလှကြီးအိမ်လည်လာရင်းနဲ့ အပင်လေးနှစ်ပင်စိုက်သွားခဲ့တယ်…
တစ်ပင်ကို ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီး… တစ်ပင်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး… ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပင်လေးတစ်ပင် လာစိုက်စေချင်တယ်…
အဲဒီအတွက် တစ်ပင်ကို ကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တယ်… အဲဒီလိုပဲ… လာပြန်စိုက်ပေးဖို့ အကြောင်းကြားလိုက်သေးတယ်…
ကျွန်တော့ခြံဝန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်… ကျွန်တော့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ… ဒါဟာလုပ်ပိုင်ခွင့်အလွဲသုံးစားလုပ်တာမဟုတ်သလို…
အဲဒါကိုမှ ဒီအပင်နှုတ်ပစ်ရကောင်းစားဆိုပြီး ကျွန်တော့်အိမ်ထဲမှာလာ ပူညံပူညံလုပ်ရင်တော့ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုအထိ
တရားစွဲရနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့… အဲဒါ Privacy & Transparency ပါပဲ…
ဒီကော်မန့်ဟာလဲ ပုဂ္ဂိုဟ်ရေးမဟုတ်ဘဲ… စာပေဝေဖန်ရေးသက်သက်ရေးသားတာဖြစ်ကြောင်း…
ဒီခြံတံခါးလေးကိုဖြင့် ပိတ်ထားလိုက်ရတော့မယ်လို့ စဉ်းစားမိပါကြောင်း
ဘာရယ်ညာရယ်တော့ သိဘူးပေါ့လေ… ကိုးကားထားတာတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရာမှ ကျုပ်ကို ဥမပါ(မှားလို့) ဥပမာပေးပြီး ပြန်ရှင်းပြထားတာကို ပြန်ရည်ညွှန်းကိုးကားတယ်ဆိုရင်လဲ သူ့လိုပဲ နလို့ပထို့မြို့မှာနေတယ်တို့၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ လစ်ဘရယ်လမ်းစဉ်ပီသစွာ နံမည်နေရာမှာ မြင်းကြီးတားပြီးတို့၊ ပရိုက်ဗိတ်ဆီလေး ထားပါလို့.. အဲလိုမဟုတ်ရင် ထရန်စပယ်ရယ်စီ ပီသစွာ ရှင်းရှင်း ဘွင်းဘွင်းကြီး ကျုပ်ပါ
အမှုတွဲနဲ့ ပါတ်သက်နေကြောင်း ပြောသလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ဘာ..
နေရင်းထိုင်ရင်း ကျုပ်ပါ ပြန်ရှင်းပြရင်း ၀င်ရှုပ်နေရမှာစိုးလို့
ဒီမိုရွာကြီးပီပီ မကျေနပ်တာတွေကို ဆန္ဒဖော်ထုတ် စီတန်းလှည့်လည် (မှားပြန်ပြီ) ရေးသားခြင်း ပြုလိုက်ရဘာဂျောင်း…
ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ ကိုစိုင်းကွမ်းခေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ သူ့နာမည်ထည့်ထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို ကိုကြောင်ဝတုတ်က ကိုးကားလိုက်လို့ပါ။ အဲဒီစာပိုဒ်ကလဲ သူ့ကိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ကျနော့်ပို့စ်မှာကတည်းက သူ့ကို ပြောပြီးသားပါ။ သူ့ကို ဥပမာပေးရုံ ရေးခဲ့တာပါ။ တော်ကြာ အရင်က ဟာကို မဖတ်မိသူက မျက်စိလည်ပြီး ကိုစိုင်းကွမ်းခေး ဆိုသူရဲ့ ပါစင်နယ်ကို ပရိုက်ဗိတ်ဆီ မထားပဲ ထရန်ပဲရန်စီ လုပ်တယ်လို့ ထင်မှာစိုးလို့ပါ။
ခင်ဗျား ကျုပ်ကွန်မန့်ကို ဖျက်ပစ်တာကို ကျနော် ဘယ်နှစ်ခါများ ပူညံပူညံ လုပ်သလဲဗျာ။ ဒဲ့လည်း ထုတ်တောင် မပြောမိပါဘူး။ ခင်ဗျား ယူတတ်ရင် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီသမား ကိုကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ ပို့စ်မှာ ဆင်ဆာမထိပဲ ပြောခွင့်ရလို့ဆိုတဲ့ အပြောဟာ ခင်ဗျားက ဖျက်ထားလို့ ရွဲ့ပြောတာလို့ ယူလို့ရချင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတောင် ကျနော့်ကို ဝေဖန်နိုင်ရင် ခင်ဗျားလဲ ဒီလောက်တော့ ခံနိုင်ရည် ရှိရမှာပေါ့။
ခင်ဗျားခြံဝင်းတံခါးလဲ ပိတ်မနေနဲ့တော့။ ခင်ဗျားပို့စ်ကို နောက်ထပ် ကျနော်မလာတော့ဘူး။ ခင်ဗျား ကျနော့်ပို့စ်တွေကို ကွန်မန့်ပေးခဲတာ သိပါတယ်။ ပေးရင်တောင် ပေးတယ်ဆိုတာလောက်ထက် မပိုပါဘူး။ အဲဒီကတည်းက ရင်ထဲမှာ မကျေနပ်စိတ်တောင် ရှိနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားနဲ့ ရင်းနှီးသူတွေထဲမှာ ကျုပ်နဲ့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်ဖူးသူတွေ ရှိတာကိုး။ ထားတော့။ ဒါတွေက မဆိုင်လို့ မပြောတော့ဘူး။
ဒီမှာ ခင်ဗျား ကိုးကားတဲ့ စကားလေးပဲ ပြန်ကောက်ရင် “လူဆိုတာ သူ့သမိုင်း သူရေးတာလို့ ပြောစကား ရေးတဲ့စာမှာ မြင်သာတယ် မဟုတ်လား။ စာဖတ်နာကြသူတွေဆို ပိုတောင်သိသေးတယ်။ အဲဒီတော့ သူမကောင်းရင် ကိုယ်ကလိုက်ပြီး အပြစ်တင် ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပါမကောင်းတဲ့ စာရင်းထဲ ပါသွားတတ်တယ်ပေါ့။” အဲဒီစကား ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ကိုးကားပြီးပြောလို့ ကျုပ်ပြန်ညွန်းတာ။
ကဲ အခုကိုယ်တိုင် ခင်ဗျားပြောသလို လိုက်နာနိုင်သေးရဲ့လား။ ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းဆို ကျုပ်သမိုင်း ကျုပ်ရေးပြီး မကောင်းတာတွေ ဝေဖန်နေရင် ဂေဇက်က စာဖတ်နာသူတွေ သိလိမ့်မှာပေါ့။ အခု ခင်ဗျားပြောသလို ကျုပ်မကောင်းတာတွေကို ခင်ဗျားက တခုချင်း ပြန်ပြီး အပြစ်တင် ဝေဖန်ပြနေတော့ ခင်ဗျားပါ မကောင်းတဲ့ စာရင်းထဲ ပါမသွားပါလား။ ခုတော့ ဒီကော်မန့်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မဟုတ်ပဲ စာပေဝေဖန်ရေးသက်သက်လို့ ခင်ဗျားလဲ မျက်နှာဖုံးစွပ်ရတာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒီကတည်းက ကျုပ်ပြောသလို ခင်ဗျားတို့ဟာ ကိုယ်က ဝေဖန်တော့ အပြုသဘော ဝေဖန်တာလို့ နာမည်တပ်ပြီး သူများက ဝေဖန်ရင်တော့ ဒီလို သဘောတရားကို ပြောနေကျလို့ ကျုပ်ပြောတာပေါ့။
အမှန်က ကျုပ်ပြောခဲ့သလို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ သဘောတရား အတိုင်းဆို တိတ်တိတ်လေး ပါးစပ်ပိတ်နေပြီး မေတ္တာပွားနေရမှာ။ ကျုပ်မကောင်းတာကို ကျန်တဲ့လူတွေ မြင်ပါစေလို့ သဘောထားရမှာ။ အခုရော ခင်ဗျားရဲ့ မူဝါဒကို ခင်ဗျား လက်ခံနိုင်သေးရဲ့လား။
အဲဒီတော့ သူများကို အဲဒါတွေ ပြောမယ့်အစား ကိုယ်တိုင်လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်မှ ပြောတာပိုကောင်းပါတယ်။
ခင်ဗျား မဆိုင်တဲ့ ပို့စ်ကို ထည့်ပြောတာတော့ ကျုပ်အဲဒီအကြောင်း ဒီမှာ မရှင်းလိုဘူးဗျာ။ ကျုပ်မြင်တဲ့ သရော်စာ ဆိုတာထက် ခင်ဗျားပြောတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် တယောက်အကြောင်းကို မဟုတ်တဲ့ဘက်က သရော်တာ ရှိတယ်။ ဥပမာ ဂေဇက်အယ်ဒီတာကို တာလီဘန်လို့ သရော်တာမျိုး။ တကယ်လဲ မဟုတ်ဘူး။ ပြောသူရော ဖတ်သူရောသိတယ်။ ကာယကံရှင်ကလည်း သရော်ပေမယ့် မနာဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတကယ် မဟုတ်လို့။ အဲဒီလို သရော်စာက တမျိုး။
နောက်တခုက တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခု ဒါမှမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက် ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့အမူအရာကို သရော်တာ။ အဲဒါကတော့ တကယ် ဖြစ်နေတဲ့ ကာယကံရှင်က နာနိုင်တယ်။ ကျုပ်ရေးတဲ့ စာက တကယ်တော့ ဒုတိယအမျိုးအစား သရော်စာ။ အဲဒါမျိုးတွေ ရေးတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ မန်းဂေဇက်မှာတောင် ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ရှေးရိုးစွဲပို့စ်နဲ့ မရှေးမနှောင်းပဲ ကျုပ်ကို သရော်စာရေးသေးတယ်။ အခုတော့ သူနဲ့ မဆိုင်လို့ သူ့ကိုမပြောတော့ဘူး။ ဆိုလိုတာက အကြောင်းအရာကို သိစေချင်တာပါ။ အဲဒီလူဟာ ခင်ဗျားနဲ့ ရင်းနှီးတယ်။ ခင်ဗျားလဲ ကွန်မန့်ပေးသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကျုပ်နာမည်သာ မပြောတာ တော့်တော့်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး တိုက်ခိုက်ထားတယ်။ အဲဒီစာလဲ ကျနော့်ကို သရော်ဝေဖန်တာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တောင် ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ အရေထူသေးရင် ခင်ဗျားတို့လဲ သူများရေးတဲ့စာကို အရေထူရမှာပေါ့။ ကျုပ် ပြောတဲ့အတိုင်း ခင်ဗျားတို့က ကိုယ်ကရေးရင် သရော်တာ သူများက ရေးတော့ သရော်စာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
နောက်ပြီး ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အကြောင်းကို ရေးတဲ့ပို့စ်မှာပဲ မကျေနပ်ရင် သဘောထားပေးနိုင်ပါတယ်။ တဆင့်ကျော်ပြီးမှ ပြောတော့ နားထောင်တဲ့လူတွေ မျက်စိလည်နိုင်တယ်။ ကျုပ်က ခင်ဗျားပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးကတည်းက ကျုပ်က ဒီအကြောင်းရေးချင်နေတာလို့ စကားခံပြီး ရေးတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီက အရေးအသားကို လုံးဝမဝေဖန်ခဲ့ဘူးဗျ။ နာမည်လေး ထည့်ရေးတာပဲ ရှိတယ်။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားကြည့်ရတာ မန်းဂေဇက်ရဲ့ စာပေအကဲဖြတ်လေသံ ပေါက်နေတယ်။ တကယ်ပဲ အဲဒီတာဝန် ယူထားသလား မသိဘူး။
ခင်ဗျား အခုပထမဆုံး စပြထားတဲ့ စာနှစ်ပိုဒ်ကလည်း စာရေးပုံ ရေးသားနည်းနဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းကို ဝေဖန်တာပဲလေ။ ကျုပ်စိုင်းကွမ်းခေးက အစချီတဲ့ နှစ်ပိုဒ်ပေါ့။ ကြွားရေးလို့ ကြွားတယ်လို့ ဝေဖန်ရင် နာမည်မှ မတပ်ပဲဗျာ။ ခံနိုင်ရမှာပေါ့။ ခင်ဗျားကို ပြောသလို ကျုပ်အကြောင်းကို နာမည်မတပ်ပဲ သိသာလောက်အောင် ရေးတဲ့ သရော်စာတွေ ရှိဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ် မသိယောင် ဆောင်နေလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားလို မျဉ်းအနီကို ဖြတ်တယ်တယ် အစိမ်းကို ဖြတ်တယ်တွေ မပြောမိပါဘူး။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့လဲ နာမည်မတပ်ရင် ခံနိုင်ရမှာပေါ့။ ဘာလို့ အတင်း ကြားထဲက နာနေရတာလဲ။
နောက်ပြီးတော့ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော်ငြင်းနေရာက ခင်ဗျား တခြားလူတွေပါ နာမည်တပ်ပြီး ခေါ်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အကြောင်းအရာပဲ ပြောကြတာ ကောင်းမယ်။ နာမည်တပ်ရင် ဝင်မပြောပဲ နေသူတွေကို အတင်းလှမ်းခေါ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ စစ်ကူမခေါ်နဲ့ဗျာ။ တယောက် တယောက်ချင်း စီးချင်းထိုးကြတာပေါ့။
ခင်ဗျား အခုလဲ ဂေဇက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေဆိုတာ ပြောပြန်ပြီ။ အခု ခင်ဗျားကိုယ်ပဲ ပြန်ကြည့်ရအောင်။ ခင်ဗျား ကျုပ်ရေးတာတွေကို တခုချင်း ပြောပြီး ကျုပ်နာမည်ပါထည့်ပြီး အခုဝေဖန်တော့လဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မဟုတ်ပါဘူး။ စာပေဝေဖန်ရေးသက်သက်လို့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ပြောနေတာပဲ မဟုတ်လား။ ဖတ်တဲ့လူတွေကို သက်သေထားပါတယ်ဗျာ။
အဲဒီတော့ ကျုပ်ပြောသလို တဘက်လူကလည်း ခင်ဗျားကို ပါစင်နယ် တိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အရေးအသားနဲ့ အာဘော်ကို ဝေဖန်တာပါဆိုရင် ဂေဇက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေကို လိုက်နာရမယ် ဆိုတာကြီနဲ့ ကိုင်မပေါက်ပဲ ခင်ဗျားတို့လည်း လက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့။ ဥပဒေကို လိုက်နာရမယ် ဆိုတာ ပြောသူကိုယ်တိုင် လိုက်နာနိုင်မှ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်ကတော့ လက်ငင်းကို ကျုပ်ပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ချိုးဖောက်ပြပြီးတော့ သူများကို လိုက်နာရမယ်လို့ ပြောတော့ တမျိုးကြီးပေါ့။
ခင်ဗျား ကျုပ်ကို ကျုပ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် နေရာရှာဖို့ ပြောတာတော့ ကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဗျာ့။ အဲဒီလို ပြောရင် ကျုပ်က ကုတ်နဲ့ကော်ထုတ်တောင် မသွားပဲ ရေးချင်ရာ ရေးဦးမှာ။ ခင်ဗျား ကြည့်ရတာ လစ်ဘရယ် ဒီမိုသာဆိုတယ် အတော့်ကို အာဏာရှင်စိတ်ဓတ် ရှိသလိုပဲ။
ခင်ဗျား စိတ်မကောင်းတာတော့ ကျုပ်လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲဗျာ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ခင်ဗျားက ကျနော့်ကွန်မန့်ကို အပြုသဘော မဆောင်လို့ ခြစ်တယ်လို့ ပြောသလို အခြားစာဖတ်သူတွေက ခင်ဗျားလို မမြင်ပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် အလွဲသုံးတယ်လို့ ထင်တာတော့ သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့။ ကျုပ်သူတို့နဲ့ မသိသလို သူတို့ကိုလည်း အဲဒီလိုမြင်ဖို့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ အဲဒါကတော့ ကျုပ်ပြောသလို ဖတ်သူက ဆုံးဖြတ်တာပါ။
အဲဒီတော့ အကျဉ်းချုပ်ရရင် ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော်ရေးတာတွေက ဖတ်သူတွေက သူတို့ဘာသာ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်မြင်သလို မမြင်လို့လည်း စိတ်မကောင်း မဖြစ် ရင်မနာပါဘူး။
ဆောရီးပဲဗျို့။ ကော်ပီကူးလိုက်တာ ပထမကွန်မန့်ပါ မေ့ပြီး ကူးထည့်မိတယ်။ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေလို့ အစချီထားတဲ့ နေရာကနေ စဖတ်ကြပါဗျာ။ မှားကူးလို့ ဆောရီးပါ။ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ခင်ဗျား မျဉ်းတားပြီး ဖျက်လက်စနဲ့ အပေါ်က နှစ်ခါထပ်ပြီး ထည့်မိတဲ့ ပထမကွန်မန့်ကလေးကို ဖျက်ပေးပါလားဗျာ။ ဒုတိယ ကွန်မန့်တော့ မဖျက်ပါနဲ့။ စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ပြီး သူတို့ဘာသူတို့ ဆုံးဖြတ်ပါစေ။
အခုဆို စာဖတ်သူတွေလား PPPT အကြောင်း ART အကြောင်း တော်တော် များများ နားလည်နေပီလို့ ယူဆပါတယ်……………..
ဆွေးနွေးပွဲကနေ personal conflict မဖြစ်လေရအောင် Topic အသစ်ပြောင်းဖို့အကြံပြုပါရစေ…..
ခဏလေးဗျို့ ………တံခါးမပိတ်ခင် နဲနဲလောက်
ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကျုပ်အမြင်တော့ ကြောင်ဝကြီးနဲ့  ကိုစံလှကြီးတို့ က
အလွန်တော်ကြတဲ့ သူတွေပါ ။ ခင်ဗျားတု့ိ နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်
ဆွေးနွေးကြရင်ဖြင့်အလွန်ခင်မင်ကြတဲ့  မိတ်ဆွေတွေများဖြစ်သွားမလားလို့ 
မယုံမရှိနဲ့ နော အတည်ပြောတာပါ ။ မခင်မင်ခြင်းနဲ့  ခင်မင်ခြင်းဆိုတာ
မျဉ်း ပါးပါးလေးတစ်ချောင်းတည်း ခြားထားတာလား လို့ ……..
ခင်ဗျား စိုးရိမ်သလို personal conflict မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော့်တော့ ထင်တာပဲ။ ကျနော့် အထင်ကို ပြောတာနော်။ မှန်ချင်မှ မှန်မယ်ပေါ့ အထင်ဆိုတော့လည်း ပေါ့လေ။ ကျနော်က ကိုကြောင်ဝတုတ်ကို ပြောချင်နေတာက တခါတလေ လူဆိုတာ ကိုယ်ပြောတဲ့ စည်းကမ်းကိုပဲ သူများကို အဲဒီလို မချိုးဖောက်နဲ့ လက်တလုံးခြားလုပ်ဖို့ မလုပ်နဲ့လို့ ပြောပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အဲဒီနည်းအတိုင်း လက်တလုံးခြား လုပ်မိတတ်တယ် ဆိုတာမျိုးပါ။
Persoanl Conflict မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တာကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကိုကြောင်ဝတုတ် ဆိုတာက ဒီမန်းဂေဇက်က တကယ့်ကို ဝါရင့် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီသမားတယောက် ဆိုတာကို အားလုံးသိကြတာပဲလေ။ ကျုပ်ကတော့ သူအမြင်သန်သန်နဲ့ ထောက်ပြခဲ့သလို စည်းကမ်းချက်တွေကို သရေကြိုးလို အလျော့အတင်းလုပ်ပြီး လှည့်ပတ်ငြင်းခဲ့သူပေါ့။ အဲဒီတော့ ချိတ်ဆိုတာမျိုးက နှစ်ခုရှိမှ ချိတ်မိတတ်တာမျိုးလေ။ ဒီတော့ ကျုပ်က ချိတ်မိချင်ရင်တောင် ကိုကြောင်ဝတုတ်လို ဖြောင့်သူနဲ့ ဆိုတော့ conflict ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။
နောက်ပြီး ကိုကြောင်ဝတုတ် ပြောခဲ့တာလဲ ခင်ဗျားတို့ ဖတ်မိမှာပေါ့။ “သူမကောင်းရင် ကိုယ်ကလိုက်ပြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပါ မကောင်းတဲ့စာရင်းထဲ ပါသွားမှာပေါ့တဲ့” ကဲဗျာ ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းတဲ့ စကားလေးလဲ။ အရသာ ရှိလိုက်တာဗျာ။ အဲဒီတော့ ကျုပ်က သူ့ကို အပြစ်တင် ဝေဖန်နေရင်တောင် သူက အဲဒီမကောင်းတဲ့ စာရင်းထဲ သူပါရောက်အောင် ပြန်ပြီး အပြစ်တင် ဝေဖန်တာတွေ ဘယ်လုပ်ပါ့မလဲနော်။
နောက်ပြီး ဒါက သူရေးတဲ့စာလေး ဖတ်ပြီးပြောတာ။ တခြား သူ့မှာ အမြင်ကျယ်တာတွေလဲ ရှိအုံးမယ်။
နောက်ပြီး အခုခင်ဗျားတို့ မြင်တဲ့အတိုင်း ကျုပ်ကသာ သရေကြိုးလို အလျော့အတင်းလုပ်ပြီး ငြင်းနေတာ သူကတော့ ကျုပ်ကို အလွန်အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ လေသံတွေ အရေးအသားတွေနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်နေခဲ့တာပါ။ ဂေဇက်ရွာမှ လူများအမြင်မှာ ကျုပ်ဟာ တကယ့်အံ့ကျော်လို လူကြမ်းကြီးပေါ့။ မတတ်နိုင်ပေဘူး။ ကျုပ်က အစကတည်းက သည်းခံရေးဝါဒ လက်ကိုင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောပြီးသား ဆိုတော့လဲ မေတ္တာသမားဖြစ်တဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်နဲ့ တွေ့တော့ ခံရတာပဲ။ နောက်လဲ ကျုပ်က သည်းခံရေးဝါဒ ရှိလာမယ် မထင်။ အခုလိုပုံပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ။
ကိုကြောင်ဝတုတ် ပြောတာလေး ကြည့်ပါအုံး။ “ဒီဥပဒေကို လူအများက လက်ခံထားပြီး ကိုယ်တယောက်ထဲ ပြင်ချင်သူဖြစ်နေရင် ကိုစံလှကြီး အနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် နေရာကို ရှာမှဖြစ်ပါတော့မယ်။” ကဲ အဲဒါပဲကြည့်တော့ ဘယ်လောက်တောင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ လေသံလေးလဲ။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပေမယ့် ရဲရင့်ပြတ်သားတယ်ဗျ။
ဒီနေရာမှာတော့ အယ်ဒီတာ kai တောင် အတုယူလောက်ပါရဲ့။ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီ သမားတယောက်ဟာ ဒီလိုပါဆိုတာ အများကို တခါတည်း ထင်းကနဲ ပြလိုက်တော့တာပါပဲဗျာ။ အားကျပါ့။
အဲဒီတော့ ရွာသူရွာသားတို့ရေ သီချင်းလေး ဆိုလိုက်မယ်နော်။ “လစ်ဘရယ်….ဒီမို…..ကိုကြောင်ဝတုတ်ပို့စ်တွေ…..ရောက်လာရင်
ပျင်းရိသူဖြစ်သည်” သွားမယ် တာ့ တာ့။ ကိုဆာမိ ကျုပ်ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲဗျို့။
ကဲ မောင်အံ့ကျော်ကြီးနှင့်တူသော မောင်မိုးတိမ်သည်လည်း မေတ္တာသမားမဟုတ်သည်တမုံ့….
ကိုကြောင်ဝတုတ်က ဒီလိုလေးတွေ ရေးသွားပါတယ်။
ရွာကိုဆူအောင် ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Member တွေရဲ့အကောင့်တွေအကုန်… အခုအချိန်အထိ သုံးလို့ရနေပါသေးတယ်…
ဒီဥပဒေကို လူအများက လက်ခံထားပြီး ကိုယ်တယောက်ထဲ ပြင်ချင်သူဖြစ်နေရင် ကိုစံလှကြီး အနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် နေရာကို ရှာမှဖြစ်ပါတော့မယ်။
အဲဒီကျေးဇူးရှင်တွေအကောင့်အမျိုးမျိုး နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်စော်ကားတုန်းက ခင်ဗျားက တရားတယ်ထင်တယ်ပေါ့။သိပ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တော်ကြီးပဲဗျ။
နောက်တစ်ခုပြောလိုက်ချင်တာက လူမသိသူမသိ ခင်ဗျားလို၊ခင်ဗျားထက်ပိုပြီး ပရဟိတ အပြင်မှာတစ်ကယ်လုပ်နေသူတွေရှိပါသေးတယ်။Privacy အရ ခင်ဗျားလိုချပြလို့မရလို့သာနေတာပါ။
ဒါဟာခင်ဗျားပြောသလို crime မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ဘဝနဲ့သူနေတာပါ။ထပ်မပြောပါရစေနဲ့တော့ဗျာ။